ရခိုင်ပဋိပက္ခ နိုင်ငံခြားသံရုံး(၉)ရုံး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (နိုဝင်ဘာ ၉) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ရခိုင်ပဋိပက္ခ နိုင်ငံခြားသံရုံး(၉)ရုံး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (နိုဝင်ဘာ ၉)
ရခိုင်ပဋိပက္ခ နိုင်ငံခြားသံရုံး(၉)ရုံး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (နိုဝင်ဘာ ၉)
Posted by kai on Nov 10, 2012 in Politics, Issues, Press Announcements | 45 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယ္ခုနောက်ဆုံး ထပ်မံ ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းအတွက် မိမိတို့ သံရုံးများအနေဖြင့် လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်ရပါသည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုများက ထောင်ပေါင်းများစွာသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်အိုးအိမ်များ ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှုများ အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်သွားအောင် သက်ဆိုင်သူအားလုံး လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ မိမိတို့သံရုံးများက တိုက်တွန
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လုံခြုံအေးချမ်း တည်ငြိမ်မှု ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ မြန်မာအစိုးရက ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို မိမိတို့နိုင်ငံများက ထောက်ခံအားပေးသည်။ ထိုသို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် တာဝန်ခံမှု ထင်သာမြင်သာရှိမှု အပြည့်အဝရှိရန်လည်း လိုအပ်သည်။
ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရက စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားခြင်းကို ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများ ပေါ်ပေါက်ရခြင်း၏ အရင်းခံအကြောင်းတရားများကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် နောက်နောင် အလားတူ ထပ်မံဖြစ်ပွါးခြင်းကို တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် လွတ်လပ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးရန် အစိုးရအာဏာပိုင်များကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်သူများလိုအပ်နေသော လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီအထောက်အပံ့များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အချိန်မီရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရမှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန်လည်း တိုက်တွန်းသည်။ ရခိုင်ဒေသတွင် အရေးပေါ်လိုအပ်သော လူသားချင်းစာနာသည့်အကူအညီများနှင့် ရေရှည် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ကူညီရန် အဆင်သင့် ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် ထိထိရောက်ရောက် ကူညီသွားနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့နိုင်ငံများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပြည့်နှင့် လုပ်ကိုင်သွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
မြန်မာပြည်သူများ လိုလားတောင့်တနေသော ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ထွန်းလာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးသော ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲ လုပ်ငန်းစဉ်များကို မိမိတို့နိုင်ငံများမှ အပြည့်အဝ အားပေးထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်အရေးတွင်သာမက တနိုင်ငံလုံး၏ ရည်မှန်းချက် ပြည့်ဝရေးအတွက်ပါ မိမိတို့ဆက်လက် ကူညီသွားရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုသည်။
9 Embassies issueastatement on Rakhine Conflict
Joint statement by the undersigned Embassies
“thousands of innocent men, women, and children in Rakhine State”
စကားလုံး အသုံးအနှုံး အတော်သတိထားသုံးသွားတာသတိပြုမိတယ်…
နောက်မှပြန်လာခဲ ့တော ့မယ်
အဲဒီအနောက်ကမ်းအရေးအခင်းကို.. အပြုသဘောဆောင်.. အဖြေတခုရအောင်.. ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တာဗျာ..။
မြန်မာပြည်ကိုလည်း.. ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေငြိမ်းပြီး.. ဒီရာစုနှစ်ထဲမှာ.. တိုးတက်သွားစေချင်တယ်..။
ရွာသူားတွေ.. Brainstorming လုပ်ရင်..ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်နေမိတယ်..။
ဒီဆယ်စု နှစ် ၁ နှစ် ၂ နှစ် အတွင်းမှာ လို့ လုပ်ပါ သဂျီးရယ်။
ပြောရရင် ဆယ်စု နှစ် ၁ နှစ် ဆိုတာတောင် သမ္မတ သက်တမ်း ၂ ခု ကျော် တယ်။
Yel Kaung says:
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်တွေရော အခြားလူမျိုးတွေရောအရင်နှစ်ရာနဲ့ချီပြီးအတူ ယခုနေနေကြတဲ့နေရာ
တွေမှာနေခဲ့ကြတာပါ။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာလောက်ရှိပြီဘာပြသနာဖြစ်ခဲ့ကြလို့လဲ။ သူ့အိမ်မှာသူနေ၊ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်နေ၊ ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ဝမ်းစာကိုယ်ရှာ နေနေခဲ့ကြတာပါ။ အခုမှပြသနာဘာလို့ထဖြစ်လဲ
အရင်အမြစ်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ(သို့)ပါတီအာဏာရအောင် စလုပ်ရာကစတင်ခဲ့ကြတာဘဲ။
အထူးသဖြင့် လူမျိုးရေးဘာသာရေးသွေးထိုးပေးတာကို ပါတီအာဏာရရေးအတွက်ဖြတ်လမ်းနည်း
(လူထုအုံကြွစေတဲ့နည်းကို)သုံးတော့တာဘဲ။ ဇာတ်လမ်းစလို့အကောင်းဆုံးနည်း၊အရေးအခင်းစလို့ကောင်းတဲ့နည်းက ဘာသာခြားမိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုပြီးဝါဒဖြန်တာပါဘဲ ၊ဗုဒ္ဓလက်ထက်က စိနတ္တမာဏ သုံးခဲ့တဲ့နည်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုရိုက်တယ်၊ ဘုရားကိုဖျက်တယ်အဖန်တရာအပ်ကြောင်းထပ်တဲ့ ဒီနည်းကိုရွေးပြီးလူထုအုံကြွပါလာအောင် လုပ်တော့တာဘဲ….. ။နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးဘက်ကိုလူထုဦးမလှည့်နိုင်အောင်စိတ်ပြောင်းလုပ်တဲ့အခါဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေဖက်ကိုမြှားဦး လှည်ပေးလိုက်တော့တာဘဲ။ ရခိုင်ဒေသမှာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကတောင်တရားဝင်ပြောထာတာပါ။ နယ်စပ်ဒေသမှာသက်ဆိုင်ရာနစခ၊ တင်းကြပ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေ၊ ခိုးဝင်လာတာ၊(တရားမ ဝင်ဗီဇာမပါဘဲ
တစ်မြို့က တစ်မြို့ညအိပ်ညနေသွားရင်တောင် ထောင်(၇)နှစ်(၉)နှစ်(၁၂)ျနှစ်ချပြီးမှတ်လောက်အောင် ဘာသာရေးလူ့အခွင့်ရေးကိုနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာပါ။ ယခုထိထောင်တွေထဲမှာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲတစ်မြို့က တစ်မြို့သွားရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဆို(မှတ်ပုံတင်ရှိပါရက်နဲ့) အာမခံနှစ်ယောက်နဲ့အာမခံထားပြီး(၁၅)ရက်
(၃၀)ရက်ထက်မကျော်လွန်တဲ့ဆေးကုသဖွင့်ကလွဲလို့ အခြားဘာသွားလာခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ မှတ်ပုံတင်
မရှိတဲ့သူဆိုခရီးသွားခွင့်မရှိဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်(၁၀)တန်း(၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးပါရင်တောင်တက္ကသိုလ်
သွားတက်ခွင့်ဗီဇာမပေးလို ့ကျောင်းမတက်ကြရသူတွေအများကြီးရှိတယ် ။နေမကောင်းလို့အခြားမြို့သွား
ဆေးကုဖို့မစဉ်းနဲ့၊ အသေခံ၊နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ် သဘာဝဘေးမုန်းတိုင်ကြောင့်ငါးဖမ်းရင်း
ဒီလောက်ပိတ်ဆို့တားဆီထားတာကြောင့် ဝန်ကြီးတွေအာဏာပိုင်တွေကပြောတာ အခုမှအုံဖွဆိုပြီး
ရောက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး ၊တရားမဝင်ခိုးဝင်လာလို့မရဘူး၊ နဂိုရှိပြီးသားလူတွေ၊
အာဏာပိုင်တွေတောင်ဝန်ခံထားကြရတယ်။ နောက်နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားကမန်တွေ အများကြီးပါ
မြို့တွေမှာအားလုံး အတူရောယှက် ဘုန်းကြီးကျောင်တွေ၊မင်္ဂလာဆောင်တွေ၊ ရှင်ပြုအလှူတွေမှာ အစ္စလာမ်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးအတူချက်၊ အတူစား၊အစ္စအစ်နေကတွေ ခရစ်စမတ်တွေမှာ
အပြားရှိတယ် ၊နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအတူနေခဲ့ကြတာ။ တစ်ချို့အစ္စလာမ်တွေဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတောင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ
အနီးစပ်ဆုံးကြည့် နဝတ တစ်ခေတ်လုံး ဘာပြသနာပေါ်ခဲ့လို့လဲ
— Deleted by Admin —
နဂိုကရခိုင်မှာနေလာခဲ့တဲ့သူတွေတောင် မှတ်ပုံတင်မပေးထားတာ နှစ်ရာနဲကချီနေပါပြီ၊လူမျိုး ဘာရေးရေးသူတို့စိတ်မဝင်စားပါဘူး၊ သူတို့ထမင်းနပ်မှန်စားရဖို့ဘဲလို့ကြပါတယ်၊ မနေတနေ့ကမိုးပွင့်စီမံချက်နဲ့ကရင်၊ချင်း။ ရှမ်းတွေမှာတောင်မနေတနေ့ကမှမှတ်ပုံတင်မြင်ဖူးကြသလို့ပေါ။ သူတို့မှာလည်းထုတ်မပေးထားပါဘူး့
နောက် အပေါ်ကဆွေးနွေးတဲ့ nozomi ဟိုဘက်ကမ်းက မာရမာ တွေနဲ့ ဒီဘက်ကမ်းက ဘင်္ဂလီတွေ နေရာချင်းလဲကြည့်ဘို့ပါ ၊ပြောင်းခါစအဆင်မပြေနိုင်ပေမဲ့ ရေရှည်တော့ ပြေလည်သွားမယ်ထင်တယ်၊ တဲ့ ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဟိုးဖက်မှာနေနေတဲ့သူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘင်္ဂါလီ
တွေကို ဒီဖက်ကို ချိန်းဖို့လဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ သူပြောချင်တဲ့ပုံက အစ္စလာမ်တွေကို နေရာပြောင်းဖို့လုပ်လို
ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါနဲ့သူနားမလည်းတာက ဟိုဖက်နိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မြန်မာစကား
မတတ်ဘူးဆိုတာ မသိတာပါဘဲ၊ ရုပ်ကလည်း ဟိုးဖက်ရုပ်တွေပါဘဲ၊ ကိုယ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြီးပြင်းမွေး
ကဲဒါဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားချင်ရင် ကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေ။ နဂိုနေရာနဂိုနေပြီးပြီပေါ၊ပြဿနာ
ဒီအထဲ.. ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်နေတာကို.. ကိုရင်က.. လူမျိုးရေးတွေတပ်ပြောလာတာမို့.. ပြဿနာဖြစ်ရပြန်ပါပြီ..။
ကိုရင်တို့က.. အတူူတူနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့.. ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်.. ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမနေလိုတာ.. ပြနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်.။
ကြားထဲ..မီဒီယာနဲ့.. အုပ်ချုပ်သူတွေပါ..အပြစ်လိုက်ပြောလက်ညိုးထိုးနေတော့.. မခက်လား..။
ဒီပြဿနာတွေကို..ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရင်း…. ဖြေရှင်းကြဖို့..လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင်.. အခုအချိန်မှာ.. သိပ်..သိပ်နောက်ကျသွားပါပြီ..။
အဲဒါကိုပြချင်လို့.. သံရုံးတွေက ပူးပေါင်းတင်တဲ့စာ..တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
အဲဒီအနောက်ဖက်ကမ်းရိုးက.. မွတ်ဆလင်တွေကို.. မေးခွန်းတခုတော့မေးချင်မိတယ်..။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးလို့.. ဘာလို့အမည်မလိုချင်ရတာလည်း.. ဆိုတာကိုပါ..။
အပြန်အလှန်စွတ်စွဲတယ်ထင်ရင်တော့ကိုခိုင်မှားမှာပေါ၊ ဒါအဖြစ်မှန်ကိုတင်ပြပေးတာပါဘဲ၊ခွဲခြားပြီး သိအောင်ရေးပေးရတာပါ။ ကိုခိုင်ပြောသလို့ကိုရင်တို့က.. အတူူတူနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့.. ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်.. ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမနေလိုတာ.. ပြနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်.။
ဆိုတာကာမှားနေပါတယ် ကျွန်တော်တို့လဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါဘဲ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာအစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လို့ပါတယ်၊သမိုင်း
သိဖို့လို့ပါတယ်၊ ထားပါတောလေကိုယ်ခိုင်ပြောသလို့ဘယ်သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံလဲ ၊ မီးရှှိုပြီးမောင်းထုတ်သတ်ပြစ်ဖို့လုပ်တာဘယ်သူလဲဆိုတာ သမိုင်းကပေါ်လာမှာပါ ရသေ့တောင်ကြေငြာ ချက်ဖတ်ကြည့်လဲ သိနိုင်တာပါ ဘဲအုပ်ချုပ်သူ တွေကိစ္စကိုတော့ မစ္စတာကင်တာနားရဲပြောကြားချက်ကို
ဘဲကိုခိုင်သိအောင်တင်ပေးပါမယ် ၊မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု တည်ဆောက်ရေးဟာ အစိုးရ အတွက် သာမက လွှတ်တော် အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အားလုံး အတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်နေ တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ
သောမတ် ကိုဟေး ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေပြီး အထက် အမိန့်အရ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းမှု ကြိုးပမ်းမှုမျိုး သာရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ဦးကျော်ဇံသာက ပြောပြပေးပါမယ်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးဆိုတာဟာ ရခိုင်ဒေသက ပဋိပက္ခကို ရေတို ထိန်းသိမ်းရေး အတွက်ရော ရေရှည်ဖြေရှင်းရေးအတွက်ပါ အရေးတစ်ကြီး လိုအပ်နေတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင် များ နှင့်တကွ နိုင်ငံတကာ ကပါ ပြောဆို ထုတ်ပြန် နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်သာမကပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာပါ တရားဥပဒေ တည်ဆောက်ရေးဟာ
အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေပြီး ဒါဟာ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောသွားပါတယ်။
“ကျနော့်အယူအဆကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာဟာ မျှော်လင့်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အခြေအနေကတော့
ဆယ်စုနှစ်တွေ နဲ့ချီပြီး စစ်အစိုးရအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ အစိုးရအတွက်သာမက လွှတ်တော်အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံး အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
ကော်မတီ တစ်ရပ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုးပြုပြီး ဖွဲ့စည်း ပေးထားတာလည်း သိရပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့အစည်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူတွေ ဟာ ယုတ်စွ အဆုံး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် အခြေခံဘောင်တစ်ရပ်ကို ဦးစွာချမှတ်သင့်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ လုံးဝ ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ နမူနာကိုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ကပြဿနာကို ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အခြေခံချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒမျိုး မတွေ့ရပါဘူး။ အမိန့်နဲ့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဟာ အခြေအနေကို လိုက်ထိန်းနေတာပဲရှိပါတယ်။”
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အခုလို ရခိုင်က ပဋိပက္ခလိုဟာမျိုးကို ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ အင်အားသုံးတဲ့အခါ တခါတခါ ပိုသွားတာ ရှိတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေလည်း ဖြစ်နေရတယ်လို့ မစ္စတာကင်တာနားက ထောက်ပြပါတယ်။
“ဒေသန္တရအဆင့်မှာလည်း ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းတွေ လိုက်နာခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကျနော်တို့ရထားပါတယ်။ ဒီလိုမလိုက်နာတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီး အင်အားအလွဲသုံးစား လုပ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။”
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း မစ္စတာကင်တာနားက ဆိုပါတယ်။
“ဒီပြဌာန်းချက်ဟာ ပြန်ပြီးတော့ သုံးသပ်ရမယ့် အချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်လို ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တယောက်က သုံးသပ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မြန်မာပြည်သူတွေ၊ အစိုးရသာမက သက်ဆိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အားလုံးက ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါ။ လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ စုဝေးရာ လွှတ်တော်ကသာ ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအမတ်တွေကနေ ဒီဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။” တဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာ အစိုးရမှာ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ အင်အားမရှိဘူး။ အင်အားနည်းနေတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက လုံခြုံရေး တာဝန်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ထမ်းဆောင်ခွင့်မရလို့ အခြေအနေတွေကို မအုပ်မိ မထိန်းမိတာလို့ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ မြင်တယ်။ သမ္မတကြီးက စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေကို သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မြေပြင်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ အောက်ခြေမှာ တာဝန်ခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ လူတွေက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရိုးရိုးသားသား ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ အလုပ်မလုပ်ကြဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက အကြမ်းဖက်သမားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ပြည်နယ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကို မထိန်းဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်နဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း အပါအဝင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပါ အကြမ်းဖက် လူတစ်စုကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘော၊ အကြမ်းဖက် ကွန်ရက် အောက်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ ကိစ္စတစ်ခုကို တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အစိုးရများဟာ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်ကြပါတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်သင့်ပါတယ်။ အခု (၅)လ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ဒီဒေသမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲ။
တကယ် ဒီကိစ္စမှာ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူလိုက်ရင် ဒီပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမယ်။ ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးမယူဘဲ ပစ်ထားတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းပြည်လည်း သိက္ခကျလှပါဘိ။ ရအောင်ထိန်းပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုံးဝတာဝန်ယူနိုင်မှုမရှိတဲ့ လက်ရှိပြည်နယ်အစိုးရထွက်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ပြန်ဖွဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပဲ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။
၊နောက်ကိုခိုင်ပြောတဲ့မွတ်ဆလင်တွေကို.. မေးခွန်းတခုတော့မေးချင်မိ တယ်..။ရိုဟင်ဂျာလို့.. ဘာကြောင့်ခေါ်စေချင်ရတာလည်း..။
လို့ပြောချင်ပါတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးပြောလာတာကရခိုင်အစွန်းရောက် တွေပါ ။ဘယ်ရိုဟင်ဂျာကဘာမှ မတောင်းဆိုပါဘူး၊ RNDP ကအကွက်ချပြီးပြောနေတာပါ၊ တကယ်တောင်းဆိုတာကRNDP ကရခိုင်သီးခြား
နိုင်ငံထူးထောင်ရေးပါ ။ပြောပြီးပါပြီသူတို့တွေကအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင် စားသောက်လို့ရရင်ပြီးတဲ့လူ
တွေပါလို့၊ သမိုင်းချီပြီးပြောရရင်တော့ရိုဟင်ဂျာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစု့တွေထဲမှာပါခဲ့ပါတယ် ၊မြန်မာအသံမှာအသံလွင့်ခွင့်တွေ ဘာတွေအထိရရှိခဲ့ပါတယ်၊သူတို့သမိုင်းကိုသိချင်ရင်တော့သီးခြားလေ့ လာကြည့်ပါ။ နဂိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု့တွေစာရင်းမှာပါခဲ့ပါတယ်၊
ခိုးဝင်လာသူတွေကိုခေါ်တဲ့အမည်နဲ့ ယခင်ရရှိပြီးသာ တိုင်းရင်းသားအမည်နဲ့ဘယ်ဟာကိုပို့ခေါ်ခံချင်မလဲဆိုတာကတော့ ကိုခိုင်စဉ်းစားပါ။ ဒါမြောက်ပိုင်းကအစ္စလာမ်တွေရဲ့အကြောင်းပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကတော့ တိုင်းရင်းသားကမန်လူမျိုးစု့တွေဘာဘဲ၊ သူတို့ကိုဘင်္ဂါလီဆိုပြီး မနေကမှခိုးဝင်လာသူတွေလိုပြောတာမလို့ချင်ကြပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲက ကူပြောင်းလာတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအစ္စလာမ်တွေလဲရှိပါတယ်၊ ရခိုင်ဘုရင်လက်ထက်က
ကာဒီဦးဆောင်တဲ့သဲအဖွဲ့ သာသာနာပြုလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကြ သည် ဆိုတဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်စဉ်ပါတီထုတ်စာအုပ်ကိုကြည့်ပါ။ ရခိုင်သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ က မန်တွေကရခိုင်သမိုင်းမှာဘုရင်စစ်တပ်အမှုထမ်းတွေရဲမျိုးဆက်တွေပါ။ အခုကရခိုင်ကအစ္စလာမ်ဆိုရင်
မနေတစ်နေကခိုးဝင်လာသူလို့ ဘင်္ဂါလီစာရင်သွင်းနေတော့တာပါဘဲ၊ ဘင်္ဂါလီရေးမှမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေး
ထဲ့အထိ လုပ်ပြီးညစ်ပတ်ထားတာတွေအများကြီးပါ။ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ ဘင်္ဂလားကလာတာပါ။ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဝင်တွေလဲ ဘင်္ဂါလီတွေပါဘဲ ။သူတို့ကိုကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တာနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးအမည်တပ်နေတာပါ ။အေးမောင်တို့ဆို့ဘင်္ဂါလီတွေပါ။ ကုလားစကားကို မွတ်နေအောင်တတ်ပါ
အခုမြင်နေရတာက အဲဒီဘင်္ဂလာက လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကနေစရာမရှိလို့ မွတ်ဆလင်ဒေသခံတွေ
နေတဲ့နေရာတွေကို တို်က်ခို်က်ဖျက်ဆီးနေတာလို့လဲ ပြောကြပါတယ်၊
လိုအပ်ရင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလတပ်ခေါ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမလို့ဖြစ်နေတာပါ
အခုမှ. . .
ဘင်္ဂလားဒေ့ချ်တိုင်းပြည်အနောက်တောင်ဖက်ဒေသတွေ.. . (အရင်က..အိနိ္ဒယပြည်)ထဲ ပါနေတဲ့.. တချို့ဒေသတွေဟာ.. ရှေးဘုရင်းအဆက်ဆက်တွေရဲ့..မြန်မာပိုင်တွေပါ…။
ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်နောက်ပိုင်း.. စာချုပ်တွေအရ တရားဝင်ကျကုန်တဲ့(မတရားသိမ်းခံရတဲ့) ဒေသတွေပါ.. ပါတယ်..။
အဲဒီဒေသနေ လူမျိုးတွေဟာ.. ဘင်္ဂလီလူမျိုးဆိုရင်..(ဒီခေတ်ဘယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာနေနေ) ရှေးအရင်ကတည်းက…အခြေချနေထိုင်နေတဲ့.. မြန်မာတွေလို့.. အသိအမှတ်ပြုဖို့.. ပိုလွယ်မယ်ထင်မိတယ်..။
(areno areno says:
“ကျွန်တော်တို့လဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါဘဲ၊ ” ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါပဲဆိုရင် လည်း အစတည်းကပြောရောပေါ့ကွယ်။ ဦးဂတုံးကြီးပြောတော့ တစ်ချို့ကို
ဘာလူမျိုးလည်းမေးရင် ဘင်္ဂါလီလို့ပြောတယ်တဲ့။ ခင်ဗျားတို့က ရိုဟင်ဂျာလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ဘင်္ဂါလီပါတဲ့။ အခုကျတော့ ဦးဂတုံးကြီး သားသမီးတွေက ရိုဟင်ဂျာလို့
မှတ်တမ်းမတင်ပေးရင် လက်မှတ်မထိုးဘူးတဲ့။ ဒီထဲကတစ်ယောက်ကတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါပဲတဲ့။ဦးဂတုံးကြီးကို ခေါင်းစားအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်။
“သမိုင်း သိဖို့လို့ပါတယ်၊ ” “မီးရှှိုပြီးမောင်းထုတ်သတ်ပြစ်ဖို့လုပ်တာဘယ်သူလဲဆိုတာ သမိုင်းကပေါ်လာမှာပါ”တဲ့- အားပါး…ပြောကတော့ ဋ္ဌေးလိမ်အူး လေသံပဲ။ ခင်ဗျားညွှန်ပြသွားတဲ့ ဘာသာတွေ ဟာ ရခိုင်ထဲမှာ တင်မဟုတ်ဘူး ဗမာတပြည်လုံးမှာရှိတယ်။ အဲဒါသမိုင်းမဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာ့ လူမျိုးတိုင်းမှာ ဘာသာပေါင်းစုံရှိတယ်။ ရသေ့တောင်ကြေငြာချက်ထဲမှာ “ဘင်္ဂါလီတွေကို
မီးရှို့မောင်းထုတ်သတ်ပြစ်”လို့ ပါလို့လား? မစ္စတာကင်တာနား အကြောင်းတော့ မပြောပါနဲ့ဗျာ။
သူအနားမှာ ဘင်္ဂါလီ ပညာတတ်ဖားများ, UN,NGO တဖက်သတ်များဝိုင်းဝိုင်းလည် နေတဲ့ကြားထဲမှာ
တစ်ပြည်လုံးက သူ့ကိုလက်မခံဘူးလို့ ဆန္ဒပြလိုက်တာ… သူဟာဘယ်တော့မှ ဗမာနိုင်ငံသားများဖက်က လိုက်ပြီးပြောရန် သေသည်အထိ အစီအစဉ်ရှိတော့မည် မထင်ကြောင်း။ အထူးသဖြင့် သူကရခိုင်ဆို
ရင် နုတ်နုတ်စဉ်းချင်နေမှာ သေချာတယ်။ “အားလုံး အတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်နေ တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ
သောမတ် ကိုဟေး ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။ ” ဆိုပဲ။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဗမာနိုင်ငံသားတွေ အတွက် စိန်ခေါ်တယ်မှုတွေဟာ မဆန်းတော့ပါဘူး။ အစတည်းကလည်း ကိုယ်တွေကသွား စိန်ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ စိန်ခေါ်မှုက သူ့အလိုလို ကျုးကျော်ဝင်ရောက်လာတာ
မဟုတ်လား။ ဟရို့..တစ်ချိန်လုံး ကင်တားနား..ကင်တားနားနဲ့ပဲ ခြိမ်းခြောက်နေတာပါပဲလား။ ခင်ဗျားကင်တားနားကြီးက မြန်မာပြည်အကြောင်း ဘယ်လောက်အတွင်း ကျကျသိလို့ ခိုင်ခိုင်မာမာတွေ အမိန့်ပေးနေတာတုံးဗျ။ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းတွေ လိုက်နာခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကျနော်တို့ရထားပါတယ်။” ဒီလူတွေထပြီး မီးရှို့ လို့ပြီးတော့မှပဲ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတွေ လူ့အခွင့်အရေးတွေ
ဘာတွေလုပ်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေ ခံနေရတုံးကတော့ သူတို့တွေ ဒီလောက်အသံမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ အင်းမသိတဲ့လူဆိုရင်တော့..သူနဲ့ အမျိုးတော်လားလို့ထင်မှာပဲ။
အချက်အလက်တွေရထားရင်လည်း စာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်လို့ကြုံရပြောလိုက်ပါ။ “ပြည်နယ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကို မထိန်းဘူး”-ဘယ်လိုထိန်းမလဲ၊ ဒီကျုးကျော်သူတွေ သွားထိန်းရင်
သူတို့အသတ်ခံရ ဘယ့်နဲ့လုပ်မလဲ။ “ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပါ အကြမ်းဖက် လူတစ်စုကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘော၊ အကြမ်းဖက် ကွန်ရက် အောက်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ”
ဆိုတော့ စစ်တပ်ကတောင် ပစ်ရင်ရခိုင်ပဲ ရွေးပစ်တာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ စကားပုံအသစ်–(ကုလားမနိုင် ရခိုင်မဲပစ်)။ “တိုင်းပြည်လည်း သိက္ခကျလှပါဘိ။”–တိုင်းပြည်သိက္ခာကျတာ ကတော့ဟေ့– သန်းခေါင်ထက်တော့ညဉ့်မနက်တော့ဘူးပဲ ပြောရမယ်။ ကျုပ်ကတော့ သိက္ခာကျတယ် မမြင်ဘူး မြန်မာတွေကို “နိုးလော့ ထလော့” လို့ပြောလိုက်သလိုပဲ။
ထလာကြပြီ လို့ထင်ရတာပဲလေ။ ဘာ contest ညာ contest တွေကျင်းပ ဘာ concert ညာ concert တွေ
လို့ပြောချင်ပါတယ်၊” ဘာမှပြစရာမလိုဘူး၊ သိချင်ရင် ရခိုင်မှာ လဝကတွေနဲ့လိုက်သွား။
ကို ကိုကိုကြီး ပြင်သစ်မှာပြောတာ နားထောင်ပြီးပြီလား? ကမန်သောင်းဂဏန်းလောက်ရှိတာတောင်
မျိုးနွယ်စုအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရတာ၊ ဒီသိန်းကျော်ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးပါလို့ ပြောနေတဲ့လူ
တွေက မပါဘူးဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါတဲ့။ အဲဒီတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ သမိုင်းကလိမ်တာလား ဝါကာအူလာဒင် တို့ကလိမ်တာလား ဆိုတာ။ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီထုတ်စာအုပ်ဆိုပဲ..အဲဒီလမ်းစဉ်လိုက်ချင်သေး တယ်ပေါ့။ သတိထားကြပါ။
ကျုးကျော်ရုံတင်မက အဲဒီခေတ်ပါပြန်သွားနေရမယ်။ မြန်မာရခိုင်တွေတစ်ချို့ဟာ ဘင်္ဂါလီလိုမွှတ်နေအောင်တတ်ကြပါတယ်။ မအအောင်လို့ သင်ထားရတာတဲ့။
“ဘင်္ဂလာက လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကနေစရာမရှိလို့ မွတ်ဆလင်ဒေသခံတွေ
နေတဲ့နေရာတွေကို တို်က်ခို်က်ဖျက်ဆီးနေတာလို့လဲ ပြောကြပါတယ်။” –ဖြီးရင်လည်း
“လိုအပ်ရင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလတပ်ခေါ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမလို့ဖြစ်နေတာပါ
အခုမှ. . ”– ကုလတပ်က ဘာမှဝင်လာ စရာအကြောင်းကို မရှိဘူး။ ဗမာတွေ ကြောက်တတ်မှန်းသိလို့
လာဖြဲခြောက် မနေနဲ့။ အမေရိကန် ဗီယက်နမ် ကိစ္စဖြစ်ပြီးကတည်းက သူတို့ နောင်ကျဉ်သွားပြီ။ ခင်ဗျားတို့
ဆရာကြီးများကသာ သွားပြီး အတင်းဝင်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်မှာပေါ့။ ဟိုကလည်း အရူးတွေမှ မဟုတ်တာ။
စစ်အစိုးရလည်းချစ်တယ် မဆလလည်းချစ်တဲ့ လူဆိုရင်တော့ “ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်းသိရ” ပါပြီခင်ဗျား။
ဘာမှန်းကို သိတော့ပါဘူးကွယ် ဖွတ်လိမ်လား ဘင်္ဂလိမ်လားဆိုတာ…။ အမှန်ကတော့ နှစ်မျိုးလုံး အတူတူနဲ့ အနူနူချဉ်းပါပဲ။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွေး တစ်ခုတွေးကြည့်ဘူးတယ် (ဘယ်လိုမှလဲ မဖြစ်နို်င်တဲ့ ကိစ္စပါ)
ဟိုဘက်ကမ်းက မာရမာ တွေနဲ့ ဒီဘက်ကမ်းက ဘင်္ဂလီတွေ နေရာချင်းလဲကြည့်ဘို့ပါ
ပြောင်းခါစ အဆင်မပြေနိုင်ပေမဲ့ ရေရှည်တော့ ပြေလည်သွားမယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဘာညာ ဆိုတာတွေ နဲ့ တကယ်တော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ
တကယ်လက်တွေ့ကြတာ တစ်ခု ပြောကြည့်ရရင်
တခြားနေရာတွေမှာလဲ ကုလားတွေ ရှိတယ် ပြသာနာ ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး
ရခိုင်မှာ မှ ရှိတယ် ဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ
အခုချိန်မှာတော့ ဒီ ကုလားတွေ မကြိုက်လို့ကွာ ဆိုပြီး အားလုံးကို ပင်လယ်ထဲ မောင်းချလို့ လဲ မရတော့ဘူး နှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမှပဲ ရေရှည်နေလို့ ရမှာ
နောက်ကွယ်က သွေးထိုးတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ မပါပဲ နဲ့ကို
တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် စိုးရိမ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိလို့ပဲ
လူဦးရေ အဆမတန်တိုးလို့ ၊ လူမျိုမှာကြောက်ရလို့
အသေးစိတ် ပြောရရင်တော့ အများကြီး ပဲ အဲဒါတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှ ရမှာ
တဖက်က ရှိနေတာ အခြားတစ်ဖက်အတွက် အနှောက်အယှက်မရှိဘူး လို့ ခံစားရအောင် လုုပ်နိုင်တဲ့ နေ့ ပြသာနာတွေ ရေရှည်မှာပြေလည်မှာပဲ
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသူတွေအတွက်ပါ။ အခုအတိုင်းမြင်နေရသလောက်တော့ အဲဒီ့ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်ဘူးပဲ။ အရင်ကတည်းက သတိရှိရမယ့်ကိစ္စ အခုကျမှ သတိထားမိလာကြတာဆိုတော့ အပ်နဲ့ထွင်းရမယ့်နေရာမှာ ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ရတာမျိုးဖြစ်နေပြီ။
အရင်ဆုံး ဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒေသတွင်းနေထိုင်သူအားလုံးပါ။ အခု Green Rose ခန့်မှန်းမိသလောက်ကတော့ ဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများက လိုချင်နေတာ ငြိမ်းချမ်းရေးမှမဟုတ်တာ။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရေးလေ။ အဲဒါကြီးက ဘယ်လိုမှလိုက်လျောဖို့ မဖြစ်နိုင်တာပါ။ လိုက်လည်း မလိုက်လျောသင့်ပါဘူး။ အဲဒီ့တော့ သူတို့ကို ဘာနဲ့ညှိနှိုင်းမှာလဲ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုတာက အရင်ကတည်းက သူတို့ရနေပြီးသားပါ။ အခုတော့ ရပြီးသားအခွင့်အရေးတောင် မရချင်သလိုဖြစ်လာတာ။
စတဲ့ပြသနာက နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြသနာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး။ မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှု တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီ့အမှုကနေ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသတ်မှတ်ပေးရေး ဆိ်ုတာအထိ ဖြစ်လာတာ တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့ဒေသ ငြိမ်းချမ်းဖို့ကို Green Rose တို့တွေလည်း လိုလားပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးမလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
ပထမဆုံး နေထိုင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား စတာတွေကို စီစစ်ပြီး သန်းခေါင်စာရင်းဝင်ဖြစ်သူ၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအားလုံးကို နိုင်ငံသားလို့ သတ်မှတ်ပြီး နေထိုင်ခွင့်ပေးရပါမယ်။ (နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကဒ်ပြားက အစစ်အမှန်သာဖြစ်ခဲ့ရင် မည်သည့်နည်းနဲ့ ရယူထားခဲ့တာလည်း ဆိုတာကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းကိုတော့ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေကို နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကဒ်ပြားထုတ်ပေးခြင်းမျိုးတွေ မရှိရအောင် ကြပ်မတ်ရပါမယ်။)
အဲဒီ့မှာ ပြသနာက နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့လူတွေကို ဘယ်ကိုပို့မလဲဆိုတာပါပဲ။ အမှန်ကတော့ သူတို့ဟာ နိုင်ငံသားသာ မဟုတ်ရင် မူရင်းတိုင်းပြည်ရှိမှာပါ။ အဲဒီ့တော့ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေထဲက မူရင်းတိုင်းပြည် ဖော်ထုတ်နိုင်သူတွေကို အချိန်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးပြီး မူရင်းတိုင်းပြည်ကို ပြန်ပို့ရပါမယ်။ မောင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သံတမန်ရေးအရ ညှိနှိုင်းပြီး ပြန်ပို့ရမှာပါ။ စစ်ဆေးချက်၊ ညှိနှိုင်းချက်အားလုံး Transparency ဖြစ်ရပါမယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးမလုပ်ခင်မှာ ဒီလိုလုပ်မည်ဆိုတာ တိုင်းသိ၊ ပြည်သိ၊ ကမ္ဘာသိ ကြေငြာချက်ထုတ်ရပါမယ်။
နောက်ဆုံးမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသားလည်း မဟုတ်သူတွေကို ဒုက္ခသည်စခန်းမှာထားပြီး စောင့်ကြည့်စီစစ်ရပါမယ်။
သေချာတာကတော့ မည်သူမဆို (နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ဒုက္ခသည်) မြန်မာပြည်အတွင်း နေထိုင်သူအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရပါမယ်။ ဥပဒေ ချိုးဖေါက်သူကို မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအတိုင်း အပြစ်ပေးရပါမယ်။ Green Rose က စိတ်ကူးမိသမျှလေးပြောတာပါ။ အမှန်က သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ရှိနေပြီးသားပါ။
အခုက အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတာကို ငြိမ်သက်သွားအောင် အရင်လုပ်ရမှာ။ လိုအပ်ရင် ကုလသမဂ္ဂတပ်တွေရဲ့ အကူအညီယူသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ်။
အံ့ဩစရာကောင်းတာက ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ သံရုံးစာရင်းထဲမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက သံရုံးတွေမပါတာပါပဲ။
ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ Foreign Embassies and Consulate စာရင်းလေးပါ။ အားလုံး(၃၂) ခုရှိပါတယ်။
Bangladesh Bangladeshi Embassy in Yangon, Myanmar
Brunei Bruneian Embassy in Yangon, Myanmar
Cambodia Cambodian Embassy in Yangon, Myanmar
Canada Canadian Embassy in (Burma), Myanmar
China Chinese Consulate in Mandalay, Myanmar
China Chinese Embassy in Yangoon, Myanmar
Egypt Egyptian Embassy in Yangon, Myanmar
France French Embassy in Rangoon, Myanmar
Germany German Embassy in Yangon, Myanmar, Myanmar
India Indian Embassy in Yangon, Myanmar
India Indian Consulate in Myanmar, Myanmar
Indonesia Indonesian Embassy in Yangon, Myanmar
Israel Israeli Embassy in Yangon, Myanmar
Italy Italian Embassy in Rangoon, Myanmar
Japan Japanese Embassy in Yangon, Myanmar
Laos Lao or Laotian Embassy in Yangon, Myanmar
Malaysia Malaysian Embassy in Yangon, Myanmar
Nepal Nepalese Embassy in Yangon, Myanmar
Pakistan Pakistani Embassy in Yangon, Myanmar
Philippines Philippine Embassy in Yangon, Myanmar
Russia Russian Embassy in Yangon, Myanmar
Serbia Serbian Embassy in Yangon, Myanmar
Singapore Singaporean Embassy in Yangon, Myanmar
South Korea Korean Embassy in Yangon, Myanmar
Sri Lanka Sri Lankan Embassy in Yangon, Myanmar
Sri Lanka Sri Lankan Consulate in Yangon, Myanmar
Thailand Thai Embassy in Yangon, Myanmar
United States American Embassy in Rangoon, Myanmar
Vietnam Vietnamese Embassy in Yangon, Myanmar
(online ကနေရှာထားတဲ့စာရင်းမို့ update ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်)
Green Rose ကတော့ အဲဒီ့သံရုံးတွေအားလုံး ရခိုင်အရေးကိစ္စမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းက ပြသနာ ကိုယ့်ဖာသာ ဖြေရှင်းရမှာဆိုပေမယ့် ကမ္ဘာက စောင့်မကြည့်ရင်တောင် ကမ္ဘာကသိအောင်လုပ်ရမှာပါ။ တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေဆိုတာ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ ခြွင်းချက်မရှိသင့်ပါဘူး။ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကသိအောင်ပြရပါမယ်။ Green Rose တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ရခိုင်အရေး ဖြေရှင်းမှုဟာ တရားသော ဖြေရှင်းမှုသာဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်မှသာ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေ နည်းပါးသွားနိုင်မှာပါ။
ဒီကိစ္စဟာ.. မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးတောင်းဆိုတာထက်ဆိုးဝါးသွားနိုင်သလို ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲဖို့ ..အန္တရာယ်အထိလည်း.. ရှိသွားနိုင်ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်း အရေးအခင်းဟာ.. ကိုယ်ပိုင်ဒေသ..နိုင်ငံတောင်းဆိုမှုအပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ်လို့.. ယူဆမိလို့ပါ…။
ဒေသထွက် သယံဇာတကနေ.. လုံလောက်တဲ့.. ဝင်ငွေလည်းရနိုင်(သွား)တာဟာ.. ပြဿနာရဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းလို့ထင်မိတယ်..
ဦးမာဃ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်
ရခိုင်အရေးဟာ တိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား မကိုင်တွယ်လို့ကတော့
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ထက်တောင် သက်တမ်းရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။
အခုမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အတွက်လဲ အန္တရာယ်များပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စလုပ်ချိန်မှာမှ အချိန်ကိုက် ဝင်လာတာဖြစ်လို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်တာလို့လဲ ထင်မိပါတယ်။
အခု အစိုးရသက်တမ်းမှာ ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ်ရင် နောင်လာမယ့် အစိုးရတွေအတွက်လဲ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဦးမာဃ တွေးမိတာလေးပါ
တဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလီတွေ ယ ယာယီမှတ်ပုံတင်တွေ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တွေ
အမှန်ကဒီလူတွေအားလုံး ဘင်္ဂလားဒေး ဘက်ကဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေ
( http://myanmargazette.net/130870/uncategorized-other/copypaste )
နောင်တချိန်ချိန်.. စာတန်းလုပ်သူတွေ အထောက်အကူရအောင်ပေါ့…
Police probing Myanmar link in Mumbai violence
Published: Monday, Oct 22, 2012, 18:18 IST
With the arrest of two more persons in the August 11 violence here, police are probing the possibility ofaforeign hand in it as one of the accused was found to have made calls to Myanmar before and after the incident, police said on Monday.
Two accused — Yusuf Ahmed Hussain Khan (25) and Sayyed Salim Anwar Pasha (40) — were nabbed on Saturday, taking the total number of arrests in the case to 63.
Five of the 63 arrested had been let off after the investigators did not find any evidence against them.
Yusuf Khan was arrested from the city after he was found to have allegedly made phone calls to Myanmar on the day of the violence, said Deputy Police Commissioner Ambadas Pote.
However, Pote did not disclose if Yusuf was at the site of violence and part of the unruly mob.
Yusuf Khan had made calls before and after the Azad Maidan attack inabid to share the information withaperson in Myanmar, said another officer, adding, “There appears to be some link in Myanmar about the violence.”
Sayyed Salim was arrested from Mysore in neighbouring Karnataka as he was allegedly part of the unruly mob on the fateful day.
Two youths were killed and 52, including 44 policemen, were injured on August 11, whenarally at Azad Maidan called to protest the alleged atrocities on Muslims in Assam and Myanmar turned violent.
ယူစွတ်အကြောင်းသိတာတော့ကြာပေါ့။အခုတလောသဂျီးက အမှန်မြင်လာသလိုပဲ။စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဒူလတိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းဝါတိုက်ပွဲက ဘယ်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို အရင်မေးလိုက်ပါ။ဖင်ပိတ်ငြင်းသောကောင်တွေရှိရင်တော့ မပြောလိုပါဘူး။ခင်ဗျားဂျီးကို အခုတလောတော့
တော်တော် လေးစားမိပြန်ပေါ့။တစ်ခုချင်းတောင်ပြန်ရှင်းရရင် စော်ကားခံနေရတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး၊တော်
ပါ။သဂျီးရေ သူတို့ပေါက်ကရပြောလေ သူတို့သောက်ရှက်ကွဲလေလို့သာမှတ်လိုက်ပါခင်ဗျ။အော်မေ့လို့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေဆိုဒ်ကိုလဲဝင်ကြည့်ပြီးပါဘီ။အမျိုးဖျက်သစ္စာဖောက်တစ်ကောင်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။မှုးဇော်ကိုလဲ သူပဲတိုက်နေတာခင်ဗျ။ဘယ်လိုသိလဲမမေးနဲ့ နတ်မျက်စိရထားဒယ် ခိခိ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ များစွာသော အဖွဲ့အစည်းတွေ (အထူးသဖြင့် သေသခံတိုင်းရင်းသားများပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ) နဲ့ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များ ကအထူးလိုလားကြပါတယ်။ နိုင်ငံတိုးတက်ရေး အရေးတကြီးလုပ်ငန်းတွေ ဥိးစားပေးလုပ်နေရချိန်မှာ အမှတ်မထင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမို့ ဘယ်သူမှမလိုလားဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီမလိုလားအပ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို မွတ်စလင်တစ်ဦးကစတင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း လူသိရှင်ကြားဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စပါ။
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတရားဝင်ရပ်တည်ရေးကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒီမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်မိပါတယ်။
(၁) သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေ ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေ့အထိ တရားမဝင်ကြောင်း စကားတလုံးမထွက်သေးတာလဲ၊
(၂) အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေ့အထိ တရားမဝင်ကြောင်း စကားတလုံးမထွက်သေးတာလဲ၊
(၃) ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်(၂)ရပ်ပေါင်း ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် က ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေ့အထိ တရားမဝင်ကြောင်း စကားတလုံးမထွက်သေးတာလဲ၊ ဒီကိစ္စကိုအရေးတကြီးအဆိုတင်သွင်းခြင်းဒီကနေ့အထိမလုပ်သေးတာလဲ၊
(၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေ့အထိ တရားမဝင်ကြောင်း စကားတလုံးမထွက်သေးတာလဲ၊
(၅) မနေ့ကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာတွေမှာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဇေယျာသီရိမှာ တပ်မတော်က ရခိုင်ပြည်နယ် (နှင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းအပါအဝင်) ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေတွေကို ပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်သော်ငြားလည်း “ရှင်းလင်း” နေရပါသလဲ။
(၆) အစိုးရကခန့်ထားတဲ့ရခိုင်အရေး၊ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဟာ လူရိုသေရှင်ရိုသေများနဲ့ဖွဲစည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါ၊ ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေ့အထိ တရားမဝင်ကြောင်း စကားတလုံးမထွက်သေးတာလဲ၊
ကြည့်တတ်ရင်တော့်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဖြေကြားတာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာခိုင်မာတဲ့၊ မလိုလားအပ်တာတွေကိုတားဆီးလိုတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းခံတွေရှိနေပါတယ်။
သေချာတာကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာ (နိုင်ငံတကာက ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်ရအောင်၊ အာဆီယံကမနာလိုဖြစ်ရလောက်အောင်) နိုင်ငံတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ လုပ်နေချိန်ပါ။ အစွန်းရောက်ချင်းမကရောက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်နဲ့လက်နက်မကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အရေးပါတဲ့နေရာတွေကို နေရာပေးပြီး နိုင်ငံအကျိုးမျက်နှာတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးလုပ်နေချိန်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၁)မတိုင်မှီကာလနဲ့ ခုချိန် နိုင်ငံကရောက်နေတဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုယှဉ်ကြည့်ရင် ကွာခြားခြင်းကကွာချားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ ငြင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စပါ။ မျက်စေ့ပိတ်ပြီး ဇွတ်ငြင်းလို့မရတော့ပါဘူး။
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး၊ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဟာ၊ နူးညံ့သိမ့်မွေ့တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေ၊ အစွန်းမထွက်အောင်ဟန်ချက်ညီနိုင်သမျှညီအောင် ထိန်းကြောင်းနေရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိမ်ခေါ်မှုတွေက နိုင်ငံနဲ့အစိုးရရဲ့အနာဂါတ်အောင်မြင်မှုကိုအရောင်သွေးပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီ inflammatory ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်သမျှလက်ရျောင်ရေးကိစ္စကအရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ။် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုcomments တွေကိုပေးနေချိန်မှာ သက်ဆိုင်သူများကဒီပြဿနာဖြေရှင်းရေးကိစ္စလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအတော်လေးနှောင့်နှေးဟန်ုတားရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြင်တတ်ကြဘို့လိုပါတယ်။ (ကိုယ်မြင်တဲ့အချက်ကို တင်ပြကြလို့ရပါတယ်။ respect the one’s view ပါ။ ကိုယ်စကားဘယ်အထိရောက်သွားတယ်ဆိုတာ သတိကြီးစွာထားဘို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အပုတ်ချပွဲကြီးဖြစ်မသွားဘို့၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေမပါလာဘို့အထူးလိုပါတယ်။ )ကိုယ်တင်ပြချက်ဟာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အကြံကောင်းညဏ်ောင်းဖြစ်သွားရင်ပိုမကောင်းဘူးလား။ Think positive ပါ။ ဝေဖန်ရင်း ကိုယ်တပ်ကိုမနင်းကြပါနဲ့။
ဒိအချိန်မှာ အမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့နဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့၊သမာသမတ်ကျတဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့မီဒီယာလောက ရပ်တည်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ဝေဖန်ချက်တွေက အခရာကျလာတည်ဆိုတာ…။
ဟုတ်ပါတယ် maungmoenyo ရေ
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တရားဝင်ရပ်တည်ရေးကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တရားမဝင်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေငြာလိုက်တာနဲ့ အခုဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စက အချိန်အကြာကြီးယူဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ရပ်တည်ချက်ရှိရပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်လည်း တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါဘူး။ မပေးလိုက်ရင်လည်း မငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါဘူး။
Green Rose ကတော့ အမေစုကိုယုံကြည်သလို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း ယုံပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်း ဆုံးဖြတ်ရင်မှားကောင်းမှားနိုင်ပေမယ့် အမေစု နဲ့ သမ္မတကြီး ၂ ယောက် ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ကိစ္စ အမှားအနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကတော့ ဒီကိစ္စကိုတတ်နိုင်သရွေ့လက်ရှောင်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်လို့ပါ။
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်တပ်ဆိုတာ ရှိရမှာဖြစ်သလို သဘာဝ အရံအတားဆိုတာမျိုးလည်း ရှိရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ရှိနေပုံက တောင်တန်းတွေ၊ သစ်တောတွေ၊ ကမ်းရိုးတန်းတွေနဲ့ ရန်သူအလွယ်တကူမဝင်ရောက်နိုင်အောင် ဝန်းရံထားတာပါ။
****အဲဒီ့ ရခို်င်ကမ်းရိုးတန်းဒေသဟာ နိုင်ငံရဲ့ အရံအတားတစ်ခုပါ။ ဘယ်သူ့လက်ထဲကိုမှ ဝ ကွက် မအပ်သင့်တဲ့ဒေသပါ။ ****
(ဦးနေဝင်းဟာ အဲဒီ့အချက်ကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ တရုတ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နယ်နိမိတ်က သစ်တောတွေကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သလို ရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသကိုလည်း မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ အတူထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်ထက် မြန်မာပြည်အတွင်း တရုတ်တွေ စီးဆင်းလာမှု နည်းပါးခဲ့သလို၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးကဲ့သို့သော သူများ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းများ နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။)
maungmoenyo ထောက်ပြထားတာလည်း ဂရုထားသင့်တာပါပဲ။ Green Rose တို့က ဒီမှာ သူကြီးကမြှောက်ပေးလို့ ကိုယ့်ဦးနှောက်လေးတွေနဲ့ကို စဉ်းစားလို့ရသမျှတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချရေးမိသမျှ ဟိုတစ်ဖက်မှာ အဆိပ်အတောက်၊ ဟိုတစ်ဖက်မှာ အဟန့်အတား ဖြစ်သွားမှာလည်း စိုးရပါသေးတယ်။ ခုထိတော့ OK နေတုန်းပဲလို့မြင်ပါတယ်။
အမလေး ပင်ပန်းလိုက်တာနော် ကိုယ်၊ နှုတ်၊ အမူအယာ မဟုတ်ပဲ ရိုက်တဲ့စာတွေကိုပါ ထိန်းသိမ်းစီစစ်နေရတာ.. ဒါပေမယ့် အမေစုတို့ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မှာစိုးလို့၊ ဂေဇက်ရဲ့ Image ကိုထိခိုက်သွားမှာစိုးလို့၊ သူကြီးရဲ့ ဒီ့ပို့စ်ကို တင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်လေး ပျက်စီးသွားမှာစိုးလို့ ထိန်းသိမ်းပါတယ်။
အခုပဲ သစ်ထူးလွင်မှာ ရခိုင်အရေးနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်ရပါတယ်။ ရခိုင်မှာ ပဋိပက္ခ များ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတကြီးမှ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင် ပဋိပက္ခများ ကြားဝင်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ICG က ဒီကနေ့ (11.11.2012) မှာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်တဲ့အကြောင်းပါ။ မူရင်း သတင်းအပြည့်အစုံက RFA ကထုတ်လွှင့်တာပါ။
ဟုတ်လိုက်လေ Green Rose ရေ။ သိက္ခာရှိတဲ့ MG အဖြစ်ရေရှည်တည်မြဲရှင်သန်ရေး၊ လောကပါလတရားတွေ လွှမ်းမိုးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံအနာဂါတ်ရောင်ခြည်ပေါ်ထွန်းရှင်သန်လာရေး …ဒါတွေ အတွက်က စာဖတ်ပရိဿတ်တင်မက၊ စာရေးကြ၊ ကလောင်သွေးကြသူတွေ အတွက်အထူးအရေးပါကြသူတွေပါလား ဆိုတာ…………………………။
(MGရဲ့ခြေလှမ်းသစ်များပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် အမြဲကြိုးပမ်းနေသော…သဂျီး နှင့်တကွ ဝိုင်းတော်သားအားလုံးအတွက်)
အာစီယံနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေ ဘောလီဘောပုတ် ကစားကွက်ဖော်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ ဘောလုံးကို ထောင်လိုက် ပုတ်ချလိုက် အလှည့်ကျ ကစားပြနေတာပါ။ နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခများမှာ ဒီလိုပဲ လုပ်လေ့ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထင်းစည်းပြေရင်တော့ ရိုက်အချိုးခံရတာ ဓမ္မတာပဲ။ ကိုယ့်ဖက်က တရားသေ ထိုင်ဆော့ ခံချမနေဖို့လိုတယ်။ လက်ဝှေ့ထိုးသလိုပဲ ကြိုးဝိုင်းထောင့်စုံ နေရာရွှေ့ ချော့လိုက်ခြောက်လိုက် လုပ်နေတာ၊ ဟာကွက်ပေါ်တဲ့တချိန် ဝင်ထိုးမှာပဲ။ ကိုယ့်က ခံစစ်ဆို တိုက်စစ်သမား စိတ်မရှည်တော့ဘဲ ဝင်ထိုးလာအောင် လုပ်ပေးပါ။ အမြဲတမ်း တိုက်စစ်ဆိုတာ ထုံးစံမရှိဘူး..။
တောက်စ် ငါသာ ကာချုပ်ဆိုရင် ကေအိုင်အို တချီထဲပြုတ်တယ်။ :harr:
ဟိုဖက်နိုင်ငံကဘင်္ဂါလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အများအားဖြင့်ရခိုင်တွေပါပဲခင်ဗျား။ရခိုင်တစ်ယောက်နဲ့ အဲဒီ ဘင်္ဂလားတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာတွေ့ဖူးလို့ ရခိုင်ကို ဘာသာစကားတူလားမေးကြည့်တော့ လေယူလေသိမ်းနဲနဲတော့ကွဲတယ်တဲ့။ သူတို့တွေက ဘင်္ဂလားလိုလည်းတတ်တယ်။ ဟင်ဒီဆိုလား အူသူး/အူဒူး ဆိုလား ပြောတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘင်္ဂလားအစိုးရက မျိုးမပြုတ်သွားအောင် မနည်းထိန်းသိမ်းထားရတာပါ။ နို့မဟုတ်ရင် သူများတွေပြောစရာဖြစ်လာမယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ၁ခုတ်၂ချက်ပြတ်…ဘုရားတွေပြန်ဆောက်ပေးတော့(ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) နာမည်ကောင်းလည်းရ အထောက်ပံ့တွေလည်းပိုရ၊ ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးကုန်သောကြောင့် အခြားဘာသာဝင်များ
မျိုးပြုန်းခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်။ တစ်နေ့ကျ ဒီဖက်ကရခိုင်တွေ သိန်းဂဏန်းလောက်ပဲရှိတော့ရင် အဲဒီအချိန်မှာ အင်အားကောင်းနေတဲ့ အုပ်စုက အဲဒီလိုလုပ်ပေးရင်လုပ်ပေးမှာပေါ့။ နယ်မြေလေးတစ်ခုပေးထားပြီး ဒါနောက်ဆုံးလက်ကျန် ရခိုင်လူမျိုးလေးတွေပါဆိုပြီးတော့။ ဥပမာ မြောက်ဦးမြို့နဲ့ မြောက်ဦးဘုရားကို အန္တရာယ်
ကင်းအောင် ခြံစည်းရိုးကာပြီးတော့ပေါ့။ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာလည်ကြမယ်လေ။ ဘင်္ဂါလီ တိုးဂိုက်မလေးတွေက လိုက်ပြမယ်လေ..ကောင်းဘူးလား၊ အရူးချီးပန်း စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပါ။
မယုံကြနဲ့နော်။ နောက်တစ်ခု နှစ်ပေါင်း ရာချီအတူနေတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေတာ ဟုတ်ရဲ့လား။ မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်တာ ဒီအမှုတစ်ခုထဲ မဟုတ်ဘူးနော်..ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာကတည်းက အမှုပေါင်းများစွာ ဖြစ်လာတာ ခင်ဗျားပြောသလိုပဲ အဖန်တရာတေနေပါပြီ။ အဲဒီတော့ ရခိုင်က ကုလားဆိုယုံကိုမယုံတော့တာ။ ဒီတော့ “ကုလားမနိုင် ရခိုင်မေး” ဆိုတာ အဲဒီဖက်က ဆိုးလှတဲ့ ဘင်္ဂလား ဖက်က ကုလားဆိုးများ
(ကောင်းတဲ့လူတွေ မပါပါ) ဆိုတာတွေအကြောင်းသိချင်ရင် ရခိုင်ကိုမေးခိုင်းတာပါ။ တကယ်နိုင်လားဆိုတော့ မနိုင်ကြရှာပါဘူး..ခံနေရတာပါ။ နောက် အစ္စလာမ် ဆိုပြီးမရောချပါနဲ့ ဗျာ။ ရခိုင်တစ်ချို့နဲ့ စကားစပ်မိလို့မေးဖူးတယ်၊် ကမန်တို့ မြန်မာကြီးတို့ ဆိုလား အဲဒါတွေကိုသူတို့လက်ခံတယ် (နောက်မှ ငွေလောင်းထားတဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ ကမန်နာမည်တပ်ထားတဲ့ လူတွေမပါဘူးနော်)။ သိသလောက်တော့ ကမန်တွေအားလုံးက ရခိုင်စကားပြောတတ်တယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့“တရားမဝင် ဗီဇာမပါပဲ” ဆိုရင်တော့ ကျောင်းတက်ဖို့တွေ ဘာတွေဘာမှဆက်ပြောမနေပါနဲ့။ တစ်ခြားနယ်တွေမပြောနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ ကျုးကျော်သူတွေလာချင်နေတဲ့ မြို့ကြီး တိုင်းကြီးထဲမှာ ၆ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရပြီး ဆရာဝန်လိုင်းမရလို့ ၁ဝတန်းကို ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်ပြီး ကျောင်းမတက်နိုင်လို့
ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း အရက်သမားဖြစ်၊ တစ်ချို့ ဆိုက်ကားနင်းစားရတာတွေ တစ်ပုံကြီးပဲ။ဇော်ဝင်းထွတ် သီချင်းထဲကလိုပြောရရင် “မင်းတယောက်ထဲ”မဟုတ်ဘူး။ မသိရင် ထပ်ပြောပါရစေ လူကြီးအိမ်က ထမင်းချိုင့်ခိုးလို့ ထောင် ၆နှစ်ကျတာကြားဖူးလား၊ အရာရှိရိပ်သာရှေ့မှာ စည်ပင်က စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေကို မူးမူးနဲ့တုတ်နဲ့ ရိုက်လို့ ထောင် ၄နှစ်ကျတယ် ဆိုလားကြားဖူးလာ အဲဒီလို မဖြစ်နိုင်တဲ့ အမှုတွဲတွေရှိနေတဲ့ကြားက… ခင်ဗျားရဲ့ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာတဲ့အမှုကိုလာငိုပြမနေနဲ့လေ စာနာစိတ်မရှိလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ သိပ်ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အုပ်စုတစ်စုမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာ အယောက်၃ဝလောက် အနဲဆုံးထောင် ၁ဝနှစ်စီ မတရားကျခံခဲ့ရတဲ့ အထဲမှာ မူဆလင်ဘာသာ တစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ ဦးဂတုံးကြီးက နှစ်၃ဝဆိုလား အဖေအမေဆုံးတာတောင် မမြင်လိုက်ရဘူး။ ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာရေးအရ နှိပ်ကွပ်တာလို့ပြောမလား။ အဲဒီထောင်ကျတဲ့လူတွေက ဘယ်သူတွေလည်းသိလား ကိုမြအေးနဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေကို
ပြောတာပါဗျာ။ အဲဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာပဲ ဆေးမကုနိုင်လို့ ဆေးရုံမတက်နိုင်လို့ ကြေကွဲစွာ သေခဲ့ရတဲ့သူ တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် အများကြီးပဲ။ အနည်းအကျဉ်း သိချင်ရင်တော့ FFSS ကကိုကျော်သူ့ ကိုသာလူကိုယ်တိုင်/ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ မေးကြည့်ပေတော့။ အများအပြားသိချင်ရင်တော့ ကိုကိုယ်တိုင် သင်္ချိုင်းမှာ သွားထိုင်ကြည့်မှဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျားသိထားဖို့က မြန်မာပြည်တွင်းမှာ မြန်မာပြည်သားစစ်စစ်ဖြစ်လျက်နဲ့ ဒီထက်ဆိုးတဲ့လူတွေ တစ်ပုံကြီး။ ဘယ်လောက်တစ်ပုံကြီးလည်းသိလား? အဲဒီ “ကြီး” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ဒီကွန်မန့်ထဲမှာ ၁ဝဆလောက်ပုံကြီးချဲ့လို့ရရင် Bold တင်ပြီးချဲ့ပြလိုက်ချင်တယ်။ အဲဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ ငိုရကောင်းမှန်း မျက်နှာငယ်လေးတွေလုပ်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ဥပမာ-ကချင်ပြည်နယ်မှာ သေနေကြတာတွေ ဟိုပြေးဒီပြေးတွေ အများအပြား..ဒုက္ခသည် မိန်းမရော ကလေးပါ ကြည့်လိုက်ရင်ကြောင်တောင်တောင်လေးတွေနဲ့ ငိုရကောင်းမှန်းလည်း မသိ စက်ရုပ်ခလေးတွေသံပတ်ပေးထားသလိုပဲ ခံစားချက်ကိုမဲ့နေကြသလိုပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ဖက်မှာကမှ
ဟိုဖက်ဒီဖက် ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ ဗွီဒီယို/ဓာတ်ပုံလာရိုက်ရင် ယောကျာင်္းတွေက အစ တန်းစီ
ပါးစပ်ကြီးတွေဖြဲလို့ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ငိုပြခွင့်ရတယ်။ အဆင်မပြေရင် ဘင်္ဂလားဖက်ထွက်ပြေးလို့ရတယ်(အခုတော့နဲနဲ ကြပ်သွားပြီပေါ့လေ)။ “ဝန်ကြီးတွေအာဏာပိုင်တွေ
ကပြောတာ အခုမှအုံဖွဆိုပြီး ရောက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး ၊တရားမဝင်ခိုးဝင်လာလို့မရဘူး၊” တဲ့။ ဒါဆိုရင် သမ္မတကြီးက ပထမဦးဆုံးဘာပြောသွားလဲ၊ ပြန်စဉ်းစားကြည့် ယူအန် ကိုတောင် လက်ခံပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံနေတာ..သူကရော အာဏာပိုင်မဟုတ်ဘူးလား? “မိုးပွင့်စီမံချက်နဲ့ကရင်၊ချင်း။ ရှမ်းတွေမှာတောင်မနေတနေ့ကမှမှတ်ပုံတင်မြင်ဖူးကြသလို့ပေါ။”တဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ် ရိုးအသူများ မှတ်ပုံတင်တောင်းရကောင်းမှန်းမသိ တောင်းလည်းမတောင်းရဲ လို့ အဲဒီစီမံကိန်းလုပ်တာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ပြီနော်။ ကျုးကျော်သူများလို လာဘ်ပေး၍တစ်ဖုံ၊
အတင်းတောင်း၍ တစ်မျိုး လုပ်ရကောင်းမှန်း ကိုမသိတာ။
“ပြဿနာ ရှာသူကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဒါဆိုရင်ပြီးတာပါဘဲ” တဲ့ အေး..ပြောတာလွယ်တယ် ဟုတ်လား? ဒီဖက်မှာလုပ်ချင်ရာလုပ်..ပြီးရင် ဟိုဖက်နိုင်ငံ
ထွက်ပြေး..မေ့လောက်ရင်ပြန်လာ..ငွေလမ်းခင်းသင့်ရင် ငွေလမ်းခင်းနဲ့ မတရားလုပ်နေခဲ့ကြတာတွေ ကြာပါပေါ့။ ရခိုင်တွေက မခံချင်တော့နီးစပ်ရာသွားလုပ်တော့ ရခိုင်ကပြေးစရာ တစ်ခြားလည်း မရှိတော့ ထောင်ကြတာတစ်မျိုး၊ ဟိုဖက်ကသတ်တာခံရတာ တစ်မျိုး။ တတိတိနဲ့ မျိုးပြုန်းဖို့ပဲ
ရှိတယ်။တစ်ကောင်ချင်းစီကို အမှည့်ခြွေခြွေ နေတာလေ။
“အထူးသဖြင့် လူမျိုးရေးဘာသာရေးသွေးထိုးပေးတာကို ပါတီအာဏာရရေးအတွက်ဖြတ်
လမ်းနည်း(လူထုအုံကြွစေတဲ့နည်းကို)သုံးတော့တာဘဲ။”တဲ့ လုပ်ပါအုံး ဘယ်ပါတီတုံး
မောင်တောက လူတွေပါတဲ့ ပါတီကိုပြောတာလား? “နဝတ တစ်ခေတ်လုံး ဘာပြသနာပေါ်ခဲ့လို့လဲ”တဲ့။ အဖိုးကိုပြန်တမ်းတနေတယ်ပေါ့။ ပြဿနာ မပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျို့ ပြဿနာတွေကိုဖုံးထားတာ။ ဖျောက်ထားတာ။ အာဏာပိုင်ကားတွေနဲ့ ငွေယူပြီး မြို့ပေါ်ကိုခေါ်သွားတာ တွေကအစသိနေကြတယ်။ မပြောရဲလို့ ကြည့်ပဲကြည့်နေရတာ။
“ငါးဖမ်းရင်းမုန်တိုင်းကြောင့်လှေမှောက်လို့မြို့နောက်တစ်မြို့ရောက်သွားရင်တောင် အစ္စလာမ်ဆိုရင်တောင်(၁၀)နှစ်” ဟုတ်လား? ကိုယ့်လူရေ အများကြီးသက်သာတာပေါ့။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တစ်ရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေ စကားအတိုင်း
မြို့ပေါ်တက်လာရင်းနဲ့ ဧည့်စာရင်းစစ်တာမိသွားလို့ (သို့) လာရာလမ်းခရီးမှာ မှတ်ပုံတင်စစ်တာ
မပါလို့ ဖမ်းသွားတာ ထောင်ထဲလိုလို ပေါ်တာလိုလိုနဲ့ အစအနပျောက်သွားတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့
စာရင်တော့ ခင်ဗျားလူတွေက ထောင်ထဲမှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတာ ပြလို့ရတယ်ဆိုတာ အခြေအနေကောင်းသေးတာပေါ့။
“လူမျိုး ဘာရေးရေးသူတို့စိတ်မဝင်စားပါဘူး၊ သူတို့ထမင်းနပ်မှန်စားရဖို့ဘဲလို့ကြပါတယ်၊” ဟုတ်လား? မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် သန်း၄ဝကျော်ကလည်း အဲဒီကိစ္စပဲ စိတ်ဝင်စားနေတာ
ဟုတ်ပြီနော်။ “ဘုန်းကြီးကျောင်တွေ၊မင်္ဂလာဆောင်တွေ၊ ရှင်ပြုအလှူတွေမှာ အစ္စလာမ်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးအတူချက်၊ အတူစား၊အစ္စအစ်နေကတွေ ခရစ်စမတ်တွေမှာ
အပြားရှိတယ် ၊နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအတူနေခဲ့ကြတာ။ တစ်ချို့အစ္စလာမ်တွေဆို
ဗုဒ္ဓဘာသာတောင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ” တဲ့။ အင်းဒီလိုခပ်ဆန်ဆန် အပြောမျိုးတွေကြားဖူးသလိုပဲ။ ကိုမိုးသီးကိုဝေဖန်ဘူးတဲ့ အထဲကလိုပါပဲ..ဟဲဟဲ။ထားပါတော့လေ..ပြောခြင်တာက သူ့ဟာသူဘာ ဘာသာပဲကိုုးကွယ်ကိုးကွယ် ဂရုမစိုက်ဘူး။ စိတ်ဓာတ် အကြံအစည် ရိုးသားကောင်းမွန်ဖို့ ပဲအရေးကြီးတယ်။အေး..ဘာသာရေးပြန့်ပွားဖို့အတွက် အနိုင်ကျင့်၊ငွေနဲ့ဆွယ်၊အားကိုးလာအောင်လုပ် တယ်ဆိုတာတွေ ကတော့ မာဖီးယားသာသာ/ယာကူဇာ သက်သက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက
ဘာသာရေးကိုသွေးထိုးပေးနေတာ ကျုပ်တို့မဟုတ်ဖူးဗျ။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကလုပ်နေတာ။ တခုခုဆို အစ္စလာမ်တွေကိုနှိပ်ကွပ်ပါတယ်ဆိုပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံတွေပါ ပါလာအောင်လုပ်နေတာ။ ပထမ racist တွေဆိုပြီးနာမည်ပေးချင်တယ်။ မရတော့ ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်ပါတယ် ဆိုပြီးလုပ်တယ်။ အဲဒါမရတော့ လူ့အခွင့်အရေးတဲ့။
ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုံးဆရာရယ် ခင်ဗျားတို့ ကျုးကျော်သူတစ်စုထဲ လူအခွင့်အရေး အခွင့်ထူးခံလူစား
မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကမှ “သူခိုးကလူလူဟစ်တယ်”လို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ အော်..ပြောရအုံးမယ် အခုကျုပ်ရေးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကူးပြီး တစ်ခြားမှာ “ရိုဟင်ဂျာ”လုို့ ခေါ်တဲ့
လူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားများက အဲသလိုနှိပ်စက်နေကြပါတယ် လို့ ပြန်ပြောင်းရေးမယ် ဆိုရင်လည်း
ဘယ်သူမှ တားဆီးဝံ့မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ထာ ထပ်ရေးအုံးမှာ။
ဆောရီးပါ အထက်ပါပိုစ့်ဟာ “Yel Kaung says:မင်္ဂလာပါသူကြီးရေ” ကို မန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရင် ဂါရုဒ(အဲဒီလိုခေါ်ရမှာလား မသိ) ရေးမှ… ကျုပ်လည်း..သူ့.. ထောက်ခံရင်း.. ရေးချင်တာလေး. ရေးတင်ပါတယ်..
မြန်မာပြည်ပေါက်.. မြန်မာစစ်စစ်တွေ မြန်မာပြည်ထဲ.. ဒီရပ်ကွက်ကနေ ဟိုရပ်ကွက်ပြောင်းညအိပ်… ဗီဇာလို…. အဲ..အဲ.. ဧည့်စာရင်းတိုင်ရပါတယ်..။
ဖမ်းမိရင်.. အရင်ကများ.. ထောင်တမ်းနှစ်ရှည်ကျသဗျ.. (အခုတော့မသိ)
နိုင်ဂျံဂါးက.. ကိုယ့်တိုင်းပြည်..ကိုယ့်အိမ်ပြန်နေသူတွေလည်း.. ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်များ.. လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့.. မရပါဘူး…. ခင်ဗျ…
မြန်မာအစိုးရက… လူ့အခွင့်အရေးအော်ပြီး.. လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်.အခြေခံဥပဒေထဲ. ပြဌာန်းထားပြီး.. (ထားပေမယ့်)
၂၀၀ရကများဆို.. ထေရဝါဒဘုန်းတော်ကြီးတွေ.. ထောင်ထဲမနည်းမနော.. ဝင်ရရှာတာပါ..။
အသတ်ခံရ.. ထွက်ပြေးရသူတွေလည်း.. မရေတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ..။
အထင်ကရဆရာတော်ကြီးတွေလည်း.. အခုထိ..တရားဟောပိတ်.. ဘုန်းကြီးဖြစ်ခွင့်ပိတ်တာတွေလည်း.. သတင်းထဲလိုက်ဖတ်ရင် တွေ့ကြမှာပါ..။
အခုလောလောဆယ်မှာကို.. မိုးပြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်..ဘုန်းကြီးတွေ.. ထောင်ထဲနှစ်ရှည်ထည့်ထားပါသဗျ..။
.. အခုအစိုးရသစ်က.. ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ထောင်ကျခံထားရသူတွေ. .ထောင်ချီလွတ်လိုက်ပေမယ့်.. သူတို့(မိုးပြာ)ခမြာ.. သူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်.. ထောင်ထဲကကို မထွက်ရပဲ.. ထောင်ချတာဟာ မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်.. ပြောနေသူတွေတောင်.. အင်တာနက်ထဲတင်တွေ့ရမှာပါ..။
တပါးတည်း.. တခါတည်းတောင်မဟုတ်.. ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးများဆို.. ထောင်အကြိမ်ကြိမ်… ချသဗျ..။
တချို့မြို့များဆို.. ကိုယ်ယုံကြည်ရာ.. မိုးပြာဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေ.. အတင်းအကြပ်လူအုပ်ဖိအားနဲ့ကို.. ထေရဝါဒပြောင်းခိုင်းနေတာ..ရှိသေး..
ကမ္ဘာမှာကျ.. အင်အားပိုကြီး.. ကိုးကွယ်သူပိုများတဲ့.. မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာများဆို.. အရင်ကများ.. စာအုပ်တောင်ထုတ်ခွင့်မရ.. တရားဟောခွင့်မရှိ.. မိရင်.. ဘာဖြစ်မှန်းတောင်.. မသိရ.. (အစ္စလမ်ဘာသာထက်အများကြီး ပိုနှိပ်ကွပ်တာပေါ့)
ထူးမခြားနား♪♫♬.. ထူး…♪♫♬.. မခြားနား… တူနယ်..တူနယ်.. ♪♫♬
အဲဒီ အစွန်းရောက်အကျင့်ပုပ်ကြီး… စနစ်ကြီးဖျက်စေချင်ကြောင်း…။
ဘင်္ဂလီတွေ.. မွတ်စလင်တွေကို.. အဲဒါလေးတွေ.. သိစေချင်သဗျာ…
မောက်ဂုဒ္ဓ လား ကုလားနာမည်နဲ့ဝင်ရေးသူရေ
ဘင်္ဂါလီတွေကို မောင်ရင်ရခိုင်လို့ပြောတာကြားဖူးတာပါဘဲ၊လဝကအက်ဥပဒေဆိုတာရှိသဗျမသိရင်လေ့လာကြည့်ပါ၊စာမတတ်ရင်တော့စယသင်ပြီးလေ့လာပေါ့ကွာ၊ ဟိုဖက်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုရခိုင်လို့ပြောရင်ဟိုဖက်နိုင်ငံကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို လည်းရခိုူင်လို့ပြောရမှာပေါ့ကွာ။ လူမျိုးနဲ့ဘာသာကို ခွဲခြားနားလည်းဖို့သူငယ်တန်ကိုပြန်တက်ခိုင်းရမလို
ရခိုင်တစ်ယောက်နဲ့ အဲဒီ ဘင်္ဂလားတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာတွေ့ဖူးလို့ ရခိုင်ကို ဘာသာစကားတူလားမေးကြည့်တော့ လေယူလေသိမ်းနဲနဲတော့ကွဲတယ်တဲ့။ သူတို့တွေက ဘင်္ဂလားလိုလည်းတတ်တယ်။ ဟင်ဒီဆိုလား အူသူး/အူဒူး ဆိုလား ပြောတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘင်္ဂလားအစိုးရက မျိုးမပြုတ်သွားအောင် မနည်းထိန်းသိမ်းထားရတာပါ။
ဆိုတော့ဘင်္ဂါလီမျိုးမပြုတ်အောင်နဲ့တူပါတယ်နော်၊၁ခုတ်၂ချက်ပြတ်… ဘုရားတွေပြန်ဆောက်ပေးတော့(ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) တဲ့ဟုတ်လား၊ဘင်္ဂလားဒေရှ်ကအစ္စလာမ်ဘာသာအုပ်ချုပ်သူတွေ
ဘာရေးဖိနှိပ်မှုကင်းနေတာကိုပြနေသလို့ပါဘဲ၊ဒါကြောင့်လည်း ရခို်င်လူမျိုးတွေကို သူတို့ကယ်တင်ထားတာပါဘဲလေ၊ဒါကို ကျေဇူးရှင်မှန်းမသိ စော်ကားနေကြတာ။မောင်ရင်ရှက်တတ်ရင်
နောက်တစ်ခု နှစ်ပေါင်း ရာချီအတူနေတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေတာ ဟုတ်ရဲ့လား။
မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်တာ ဒီအမှုတစ်ခုထဲ မဟုတ်ဘူးနော်..ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာကတည်းက အမှုပေါင်းများစွာ ဖြစ်လာတာ ခင်ဗျားပြောသလိုပဲ အဖန်တရာတေနေပါပြီ။
ရက်စက်ခဲ့တဲ့အမှုတွေချည်းပါဘဲ၊တကယ်မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အကောင်ကလဲ မောင်ရင်အမျိုးအရင်ကြီးပါ၊
သေဒဏ်ချတဲုအကောင်လေးတွေက လူကြီးတောင်မဖြစ်ကြသေးပါဘူး၊ ၁၂ နှစ်သားနွားကျောင်းဆိတ်
အဲဒီတော့ ရခိုင်က ကုလားဆိုယုံကိုမယုံတော့တာ။ မဟုတ်ဘူးကုလာဒနေတိုင်ထိုင်ရှိခိုးပြီး၊ကုလားကျေး
ဒီတော့ “ကုလားမနိုင် ရခိုင်မေး” ဆိုတာ
တာမဟုတ်ပါဘူးနွားလေးရာ၊ကုလားမနိုင်ရခို်င်မဲ လို့ဆိုပါ။ မဲတယ်ဆိုတာ ဖိနိပ်တာသတ်တာကို
ပြောတာပါ၊မေးလို့ မရှိပါဘူး၊စကားပုံကိုသေသေချာချာလေ့လာပါ၊ တကယ်နိုင်လားဆိုတော့ မနိုင်ကြရှာပါဘူး..ခံနေရတာပါ။ နောက် အစ္စလာမ် ဆိုပြီးမရောချပါနဲ့ ဗျာ။
ရောချစရာမလို့ပါဘူးလက်တွေဖိနှိပ်နေတာပါဘဲ၊ရခိုင်တစ်ချို့နဲ့ စကားစပ်မိလို့မေးဖူးတယ်၊် ကမန်တို့ မြန်မာကြီးတို့ ဆိုလား အဲဒါတွေကိုသူတို့လက်ခံတယ်
(နောက်မှ ငွေလောင်းထားတဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ ကမန်နာမည်တပ်ထားတဲ့ လူတွေမပါဘူးနော်)။
-မောင်ရင်သိရအောင်ပြောရရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ကို လွယ်လွယ်ကူကုူရတယ်
မထင်နဲ့ ပြည်နယ်၊ဝန်ကြီး အထိ တိတိကျကျတင်ရတာ၊ကဒ်တစ်ခုရဖိုနှစ်နဲ့ချိကြာတယ်၊ရခိုင်မှာ
သိသလောက်တော့ ကမန်တွေအားလုံးက ရခိုင်စကားပြောတတ်တယ်။
ခင်ဗျားပြောတဲ့“တရားမဝင် ဗီဇာမပါပဲ” ဆိုရင်တော့ ကျောင်းတက်ဖို့တွေ ဘာတွေဘာမှဆက်ပြောမနေပါနဲ့။ တစ်ခြားနယ်တွေမပြောနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ ကျုးကျော်သူတွေလာချင်နေတဲ့ မြို့ကြီး တိုင်းကြီးထဲမှာ ၆ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရပြီး ဆရာဝန်လိုင်းမရလို့ ၁ဝတန်းကို ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်ပြီး ကျောင်းမတက်နိုင်လို့
ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း အရက်သမားဖြစ်၊ တစ်ချို့ ဆိုက်ကားနင်းစားရတာတွေ တစ်ပုံကြီးပဲ
နိုင်တာကို မသိတာဝမ်းနည်းစရာပါဘဲ၊ စာမတတ်တာလား
သိပ်ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အုပ်စုတစ်စုမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာ အယောက်၃ဝလောက် အနဲဆုံးထောင် ၁ဝနှစ်စီ မတရားကျခံခဲ့ရတဲ့ အထဲမှာ မူဆလင်ဘာသာ တစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ ဆိုစာရင်းလိမ်တွေပါ၊ သေသေချာချာချာလေ့လာပါကွယ်၊
ဦးဂတုံးကြီးက နှစ်၃ဝဆိုလား အဖေအမေဆုံးတာတောင် မမြင်လိုက်ရဘူး။ ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာရေးအရ နှိပ်ကွပ်တာလို့ပြောမလား။ကိုမြအေးနဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေကို
–ဒါက နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ကျတာနဲကမတူတာတွေကို မနိုင်းပါနဲ့၊
အဲဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာပဲ ဆေးမကုနိုင်လို့ ဆေးရုံမတက်နိုင်လို့ ကြေကွဲစွာ သေခဲ့ရတဲ့သူ တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် အများကြီးပဲ။
နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ ငွေမရှိရင်တောင်မွတ်ဆလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံမှာအလကားကုပေး ပါတယ်၊ ဘုန်ကြီးတွေတောင်အဲဒီမှာကုတာအများကြီးပါ၊
ဥပမာ-ကချင်ပြည်နယ်မှာ သေနေကြတာတွေ ဟိုပြေးဒီပြေးတွေ အများအပြား..ဒုက္ခသည် မိန်းမရော ကလေးပါ ကြည့်လိုက်ရင်ကြောင်တောင်တောင်လေးတွေနဲ့ ငိုရကောင်းမှန်းလည်း မသိ စက်ရုပ်ခလေးတွေသံပတ်ပေးထားသလိုပဲ ခံစားချက်ကိုမဲ့နေကြသလိုပဲ။
ခင်ဗျားတို့ ဖက်မှာကမှဟိုဖက်ဒီဖက် ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိတယ်။
— ပေါက်ကရပြောမနေပါနဲ့ လူအုပ်နဲ့
ဘယ်လို့ပြန်တိုက်မလဲ၊ အားလုံးပါနေတာ ၊ဒေါ်စုပြောသလိုလူရယ်စရာဖြစ်နေပါမယ်၊ လက်ညိုးလေးတောင် မထောင်ခဲ့ဘဲအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်ရောလေ၊
ဗွီဒီယို/ဓာတ်ပုံလာရိုက်ရင် ယောကျာင်္းတွေက အစ တန်းစီ
ပါးစပ်ကြီးတွေဖြဲလို့ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ငိုပြခွင့်ရတယ်။တဲ့ဟုတ်လို့လား
–မောင်ရင်မြင်လို့လား၊ ဘေးနားမှ သေနတ်ကိုင် ခါးထောက်ပြီးမျက်ထောက်နီင်္ကြီးနဲ့ကြည့်နေတာပြန်ရင်
အဆင်မပြေရင် ဘင်္ဂလားဖက်ထွက်ပြေးလို့ရတယ်(အခုတော့နဲနဲ ကြပ်သွားပြီပေါ့လေ)။
“ဝန်ကြီးတွေအာဏာပိုင်တွေကပြောတာ အခုမှအုံဖွဆိုပြီး ရောက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး ၊တရားမဝင်ခိုးဝင်လာလို့မရဘူး၊” တဲ့။ ဒါအမှန်ဘဲလေ၊
ဒါဆိုရင် သမ္မတကြီးက ပထမဦးဆုံးဘာပြောသွားလဲ၊ ပြန်စဉ်းစားကြည့် ယူအန် ကိုတောင် လက်ခံပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံနေတာ..သူကရောအာဏာပိုင်မဟုတ်ဘူးလား? ဒါက မေတ္တာဘဲရပ်ခံတတ်လို့ပါကွာ။ မြန်မာက ကမ္ဘာအဆင်ရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာဝင်နေတာကို ဘယ်သူ
မှ မနေချင်လို့ အပြင်ထါက်အလုပ်လုပ်နေတာပေါ့ကွ၊
“မိုးပွင့်စီမံချက်နဲ့ကရင်၊ချင်း။ ရှမ်းတွေမှာတောင်မနေတနေ့ကမှမှတ်ပုံတင်မြင်ဖူးကြသလို့ပေါ။”တဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ် လို့ မောင်ရင်ဝန်ခံတာကောင်းသားဘဲ၊
ထွက်ပြေး..မေ့လောက်ရင်ပြန်လာ..ငွေလမ်းခင်းသင့်ရင် ငွေလမ်းခင်းနဲ့ မတရားလုပ်နေခဲ့ကြတာတွေ ကြာပါပေါ့။
— ဟုတ်လားဒါနယ်စပ်တိုင်းဖြစ်နေတာပါဘဲ ထိုင်းဖက်မှာပိုဆိုးသေး။လူမျိုးစုတစ်စု
ရခိုင်တွေက မခံချင်တော့နီးစပ်ရာသွားလုပ်တော့ ရခိုင်ကပြေးစရာ တစ်ခြားလည်း မရှိတော့ ထောင်ကြတာတစ်မျိုး၊ ဟိုဖက်ကသတ်တာခံရတာ တစ်မျိုး။ တတိတိနဲ့ မျိုးပြုန်းဖို့ပဲ
မှာထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေ။ သိန်းနဲ့ချီ ရှိနေတါလွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပေးထားတာကိုလေ့လာပါအုံး
ဒါတောင်မသိတာလူရယ်စရာပါဘဲ၊RNDP ပေါ ငတုံးကလေးရေ၊အခုအစိုးရကတောင်ခေါ်ပြီးသတိပေး
ထားပြီးပြီ၊ ဆန္နပြဖိုဆိုရင် ဘယ်ပါတီကမြောက်ပေးတာမောင်ရင်ကိုယ်တိုင်သိမှာပေါ့၊
“နဝတ တစ်ခေတ်လုံး ဘာပြသနာပေါ်ခဲ့လို့လဲ”တဲ့။ အဖိုးကိုပြန်တမ်းတနေတယ်ပေါ့။ ပြဿနာ မပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျို့ ပြဿနာတွေကိုဖုံးထားတာ။ ဖျောက်ထားတာ။ အာဏာပိုင်ကားတွေနဲ့ ငွေယူပြီး မြို့ပေါ်ကိုခေါ်သွားတာ တွေကအစသိနေကြတယ်။ မပြောရဲလို့ ကြည့်ပဲကြည့်နေရတာ။
— တဲ့လားဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရှိရင် တင်ပြပါမောင်ရင်
အောင် တပ်မတော်ကဘဲတာ-ဝန်ယူလုပ်နေတာပါမောင်ရင်ရယ်၊မောင်ရင်ဒီမိုကရေစီက အော်ဖိုဘဲ
ဆိုတာကို နားမလညလ်ဘဲ လူနည်းစုတွေကို ဖိနှိပ်လို့ရတယ်ထင်ရင်မှားမှာပေါ။
ပေါက်ကရ အဲဒီလိူ့မရှိပါဘူး၊ ပဲုံမှန်ဧည့်စာရင်းစာစရင်းစစ်ပြီးဒါဏ်ငွေလောက်နဲ့ပြီးပါတယ်၊
..ဘာသာရေးပြန့်ပွားဖို့အတွက် အနိုင်ကျင့်၊ငွေနဲ့ဆွယ်၊အားကိုးလာအောင်လုပ် တယ်ဆိုတာတွေ ကတော့ မာဖီးယားသာသာ/ယာကူဇာ သက်သက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဆန္နပြဖို့ ဖျက်ဖို့RNDP ငွေထုတ်ပြီးအစ္စလာမ်ရွာတွေဖျက်ခိုင်းထားတာသိက့လိမ့်မယ်၊
ဘာသာရေးကိုသွေးထိုးပေးနေတာ ကျုပ်တို့မဟုတ်ဖူးဗျ။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကလုပ်နေတာ။
တခုခုဆို အစ္စလာမ်တွေကိုနှိပ်ကွပ်ပါတယ်ဆိုပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံတွေပါ ပါလာအောင်လုပ်နေတာ။
သူခိုးကလူလူဟစ်မနေပါနဲ၊ အေး ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲသိလား၊ရခိုင်တွေကို ဘင်္ဂလားကခေါ်တဲံနာမည်ဘဲ မှတ်ထား၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မင်းတို့အဖေတွေပါဘဲ။
နိုင်ငံခြားမှာမြန်မာကို ရွှေ ခေါ်သလို့ဘဲ။ ဟိုမှာ ရခိုင်ပြည်ကအကောင်တွေကိုခေါ်တာ၊
ပြီးတော့ အပေါ်မှ ဟိုတကောင်က ကင်တားနားကို စော်ကားနေသေးတယ်၊ စောက်ဆင့်မရှိဘဲပြော
နေကြတယ်၊ကင်တားနားဆိုက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကလူကွ၊ဘယ်ကောင်တွေမတရားတာလုပ်တယ်
မလုပ်တယ်သူ နားလည်းတယ်၊ မင်းတို့သူပါတဲ့ချေးတုန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိဘဲ၊UN စော်ကားလိုက်UNHCR စော်ကားလိုက် လုပ်မနေဲ့ပြီးတော့သူများကျွေးစားမွေးစာနဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်ချင်သေးတယ်၊
Yel Kaung လားမြန်မာနာမည်နဲ့ ဝင်ရေးသူရေ။ ကျွန်တော့်နာမည်က ဂုတ်လည်း မဒဘူး ဂုတ်သွေးလည်း မစုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်မြန်မာ မြန်မာစာမတတ်ဘူးထင်ရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါ ဆက်ပြီးလေ့လာပါမယ်။ ခင်ဗျားက စာပိုတတ်ရင်တော့ ကျွန်တော့်နာမည် ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်း သိချင်ရင်ရှာကြည့်လိုက်ပေါ့။
“ လူမျိုးနဲ့ဘာသာကို ခွဲခြားနားလည်းဖို့သူငယ်တန်ကိုပြန်တက်ခိုင်းရမလိုပါဘဲ၊
ဪ ခင်ဗျားတို့ ပညာရေးကတယ် အဆင့်မြင့်ပါလား သူငယ်တန်းမှာ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာခွဲခြားနားလည်နိုင်တယ်??? အံ့မခန်းပါပဲဗျာ..။ ဟဲဟဲ ဉာဏ်ရည်မပြည့်ဖြိုးတဲ့ သူတွေ
နေတဲ့နေရာကို ခင်ဗျားကလာတယ်ဆိုတော့၊ ခင်ဗျားက စဉ်းစားဉာဏ်ပါ မရှိဘူးဖြစ်သွားတာ
“ဘင်္ဂါလီတွေကို မောင်ရင်ရခိုင်လို့ပြောတာကြားဖူးတာပါဘဲ၊ လဝကအက်ဥပဒေဆိုတာရှိသဗျမသိရင်လေ့လာကြည့်ပါ၊”
“ဒါကြောင့်လည်း ရခို်င်လူမျိုးတွေကို သူတို့ကယ်တင်ထားတာပါဘဲလေ၊”
အပေါ်ကနှစ်ကြောင်းက ရှေ့နောက်မညီတာပြနေတယ်နော်။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကိုက ဟိုဖက်ကရခိုင်တွေကို ရခိုင်လို့ပဲ ပြောနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ပြန်ပြင်ရင်ပြင်လိုက်။ နို့မို့ရင်ရေးထား တာတွေအားလုံး အလကားဖြစ်သွားမယ်။
ပြောထားပြီးသား ဘာသာခြား လူမျိုးတစ်မျိုးပျောက် သွားမှာစိုးလို့ ပါ လို့ပြောထားတယ်လေ
သားသားရဲ့။ ကျွန်တော်မျိုးက ဘာအတွက်များရှက်ရမှာတုန်းဗျာ။ ရခိုင်မှာသွားပြီးကျုးကျော်နေတာလည်းမဟုတ်။ မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်နေတာမှ မဟုတ်ထာ။
ဘာဖတ်စရာလိုလည်းကွာ သမိုင်းလိမ်ကခပ်များများရယ်နဲ့ ဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ အရင်ကမင်းတို့ပဲပြောပြီးကမန်တွေ ရခိုင်တပ်မှာ အမှုထမ်းခဲ့တယ်ဆို။သူတို့ ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်တွေဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒါဘာဖြစ်လဲ? အင်္ဂလန်မှာ ဂန္ဒီကြီးရုပ်ထု ပန်းခြံထဲရှိတာနဲ့ပဲ အဲဒီပန်းခြံ ကုလားပြည်အပိုင်ဖြစ်ရောလားကွာ။
“မောင်ရင်တို့ဖိနှိပ်ခဲ့ ရက်စက်ခဲ့တဲ့အမှုတွေချည်းပါဘဲ၊” ဘာအမှုတွေတုန်းဗျ? ရခိုင်အထီးတွေက ဘင်္ဂါလီမလေးတွေကို မတော်မတရားလုပ်တယ်ပေါ့လေ? တယ်လဲဆိုးတဲ့
မဖြစ်ကြသေးပါဘူး၊ ၁၂ နှစ်သားနွားကျောင်းဆိတ် ေကျောင်းသားလေးတွေပါ။”
အော်..အဲကောင်လေးက ဗမာလား?ဟုတ်လောက်ဖူးထင်တယ်။ပြီးတော့ ဒါ ခင်ဗျား အပြောလေ..မမှန်ဘူးထင်ရင် အများနဲ့သွားငြင်းလေ..။ဘယ့်နှယ် ကျုပ်လာပြောနေရအောင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ဝင်လဲမဟုတ်။ မန်းတလေးဂေဇက် အဖွဲ့ဝင်သက်သက်ပါဗျာ။
ဒါနဲ့ မောင်တောက ရခိုင်ကျောင်းအုပ်ကြီးကတော့ သူ့တပည့်လေးတွေကိုယ်တိုင် သတ်သွားတယ်ဆိုလား..ကြားတာနော်။မကျေနပ်ရင် သူကြီးကိုတိုင်လို့ရတယ်နော်။
“ဒီတော့ “ကုလားမနိုင် ရခိုင်မေး” ဆိုတာ တာမဟုတ်ပါဘူးနွားလေးရာ
၊ကုလားမနိုင်ရခို်င်မဲ လို့ဆိုပါ။ မဲတယ်ဆိုတာ ဖိနိပ်တာသတ်တာကို ပြောတာပါ၊
မေးလို့ မရှိပါဘူး၊စကားပုံကိုသေသေချာချာလေ့လာပါ၊ တကယ်နိုင်လားဆိုတော့ မနိုင်ကြရှာပါဘူး..ခံနေရတာပါ။” ဪ နွားကြီးက ကျုပ်ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလီကို မြန်မာစကားပုံပြန် သင်ပေးရှာတယ်။ အခုထက်ထိ ဂျပိုးကိုလိပ်ဖြစ်အောင်ပြောတဲ့ အကျင့်တွေ မဖြောက်နိုင်သေးဘူးနော်?
“-မောင်ရင်သိရအောင်ပြောရရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ကို လွယ်လွယ်ကူကုူ
ရတယ် မထင်နဲ့ ပြည်နယ်၊ဝန်ကြီး အထိ တိတိကျကျတင်ရတာ၊ကဒ်တစ်ခုရဖိုနှစ်နဲ့ချိ
ကြာတယ်၊ရခိုင်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ဘယ်လောက်တင်းကျပ်ထားသလဲဆိုတာ
လဝကကိုမေးကြည့်၊သိပါတယ်၊ ” အာဟား..အားလုံးက လဝက တွေနဲ့ပေါင်းစားနေတယ်လို့
ပြောနေကြတာ ကျုပ်ကသွားမေးရအောင် လူမိုက်မှမဟုတ်တာ။
“ ဆိုစာရင်းလိမ်တွေပါ၊ သေသေချာချာချာလေ့လာပါကွယ်၊” လေ့လာစရာမလိုဘူးဗျို့ ဒိထက်တောင်ပိုသေး။အခုထက်ထိမလွတ်သေးတာတွေ အများကြီး။
ကျောင်းမတက်နိုင်တာကို မသိတာဝမ်းနည်းစရာပါဘဲ၊” ကျုးကျော်တာကျုးကျော်တာပဲ
ထပ်ပြောအုံးမယ် ဘာသာရေးဆွဲဆွဲမထည့်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားက မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေ
ပိုက်ဆံမရှိတာငါနဲ့မဆိုင်၊ ငါပိုက်ဆံရှိတယ်ကျောင်းတက်ခွင့်ငါ့ကိုပေးလို့ပြောနေတာနဲ့ အတူတူပဲ။
“–ဒါက နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ကျတာနဲကမတူတာတွေကို မနိုင်းပါနဲ့၊” ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား ကို ဆေးသောက်ရင် ပုလင်းလှုပ်သောက်ဖို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒါပေါ့ နိုင်ငံကောင်းစားရေး
လုပ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ထောင်ကျတာ ကျတော့ မနှိုင်းနဲ့တဲ့။ ဖတ်နေသူများရှိရင် သူရေးထားတာတွေသာ ဖတ်ကြည့်ကြပါဗျာ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီလူ့သဘောထား မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ဘယ်လိုရှိလည်းသိနိုင်ပါတယ်။
နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ “ ဪမတူဘူးလား..ငွေနဲ့ ဖိတိုင်းမရဘူးလို့
သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့? အကြံပေးလိုက်မယ် ငွေရှိရင် ဘင်္ဂလားမှာ(သို့)
စင်္ကာပူမှာသွားကု။ ဗမာပြည်မှာ မွတ်ဆလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံတစ်ခုထဲရှိတာ မဟုတ်ဘူး
ဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံတွေရှိတယ်။ တစ်ချို့ဂျီးများတဲ့ဘာသာတွေ ကတော့ သူတို့ဆေးရုံပဲတက်ချင်မှာပေါ့လေ။ အင်း..ကိုကျော်သူကြီးတောင် မူဆလင်ဘာသာတွေကို
သူ့ဆေးရုံလာတက်လို့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ထားတာ တွေ့လိုက်သေးတယ်။
“ဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းဒီအတိုင်းဘဲ၊ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ကလူသိအောင်တင်ပြနိုင်ရမှာပေါ”
ကြည့်စမ်းပါအုံး မောင်တောကများရေးနေတာလား မသိ၊ ဒီမှာလည်းဒီအတိုင်းဘဲ တဲ့။
တင်ပြတဲ့လူကတင်ပြတာပေါ့ဆရာသမားရယ်။ အဲ…ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားရခိုင်တွေ အတွက်ပြောတာနော်။ ကျုးကျော်သူ အကြမ်းမဖက် လူကောင်းတွေအတွက်လည်း ပါမှာပါ။
“— ပေါက်ကရပြောမနေပါနဲ့ လူအုပ်နဲ့ ဘယ်လို့ပြန်တိုက်မလဲ၊” ပေါက်ကရ မပြောဝံ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ မောင်တောမှာ ဦးထုပ်ဖြုဖြုလေးတွေ လမ်းမကြီးအပြည့်ပြေး လားကြပြီး
အိမ်တွေမီးရှို့ ဖျက်စီးတာတွေ တွေ့လို့ပါဗျာ။ ဒေါ်စုကရော ဘာပြောသလည်း ပြောပါအုံး။
နောက်ဆုံးကိစ္စပြောတာ ကျုပ်ကြားလိုက်တာကတော့ ဘက်လိုက်ပြီးမပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့ နှစ်ဖက်လုံး အပြန်အလှန်မီးရှို့ နေကြတာကိုးတဲ့။
“ ထုတ်ဖော်ငိုပြခွင့်ရတယ်။တဲ့ဟုတ်လို့လား–မောင်ရင်မြင်လို့လား၊ ဘေးနားမှ သေနတ်ကိုင် ခါးထောက်ပြီးမျက်ထောက်နီင်္ကြီးနဲ့ကြည့်နေတာပြန်ရင် ဆွဲကုတ်သွားမှာသိနေရက်နဲ့
ဘယ်သူပြောမလဲ၊” မြင်တာပေါ့ဗျာ you tubeမှာပါတယ်လေ လိမ်ထားတာတွေမှ အများကြီး . ဘယ်သူတွေက ခါးတွေထောက်ပြီး မျက်ထောင့်နီနဲ့ကြည့်တာလဲ ပြန်စဉ်းစားပါအုံး။ အစဉ်လာရှိတဲ့ တို့တပ်မတော် တောင်သူတို့နဲ့မှ ဒူးတွေတုန်နေတော့တယ်။
“–အခုတင်မဟုတ်ဘူး၊အရင်လဲမင်းအဖေတွေစောင့်နေတာ၊ဘင်္ဂလားကလဲထွက်ပြေးလဲ ဒီနိုင်ငံကရခိုင် တွေဘဲဆိုပြီးပြန်ပို့တာပါမောင်ရင်”၊ ဒါခင်ဗျားစကားနော် ထွက်ပြေးလဲ
ကျုပ်အဖေ ခင်ဗျားပထွေးတွေက ပြန်ပို့တယ်ဆိုတာ။ အဲသလိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံစမ်း ပါ..။
“မြန်မာက ကမ္ဘာအဆင်ရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာဝင်နေတာကို ဘယ်သူမှ မနေချင်လို့
အပြင်ထါက်အလုပ်လုပ်နေတာပေါ့ကွ၊” ဟုတ်တယ်လေ ဝမ်းစာအတွက်ထွက်လုပ်ရမှာပေါ့။ အကိုကြီးဂျာတို့လို ဘဝပေးကံကောင်းသူများကို UN, NGOအဖွဲ့တွေ ထောက်ပံ့ သလို၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်သူကမှ တင်မကြွေးထားဘူးလေကွယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ဆင်းရဲပါတယ် ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ ဘင်္ဂလားထက်တော့ အစာရေစာပေါပါတယ်ဗျာ။ ငါးတွေမှကြိုက်သလောက်စားစမ်း။ ထူးဆန်းတယ်နော် ငါးတောင်မှာ ဘင်္ဂလားဖက်မှာ မနေဘူး ဒီဖက်မှာပဲနေတယ်။
“ ဟုတ်ပါတယ် လို့ မောင်ရင်ဝန်ခံတာကောင်းသားဘဲ၊” ဘာကိုဝန်ခံရမှာလည်း ခင်ဗျားပြောတဲ့စီမံချက်ကို နှိုင်းယှဉ် ပြောပြတာလေ။ အဲကျုပ်ကပြောတယ်ပဲ ထားအုံး
“– ဟုတ်လားဒါနယ်စပ်တိုင်းဖြစ်နေတာပါဘဲ ထိုင်းဖက်မှာပိုဆိုးသေး။လူမျိုးစုတစ်စု
တပ်မရှိဘဲငြိမ်ချမ်းနေတာကသိတတ်ရင် ထိုင်ရှိခိုးဖိုးကောင်းနေပြီး၊” ထိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာပဲလား။ လက်နက်ကိုင်တာက ဖုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းခံထွက်ရင် အသတ်မခံရအောင် လို့ကြားတယ်။
မှာထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေ။ သိန်းနဲ့ချီ ရှိနေတါလွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပေးထားတာကို
လေ့လာပါအုံး” သူတို့ဟာသူတို့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံသွားတာ ခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေက ခင်ဗျားနဲ့အမျိုးတော်လို့လား? တော်ရင် အမျိုးတွေဆီသွားနေလေ။
ခင်ဗျားတို့ “ရိုဟင်ညာ”ရပ်ကွက်ထဲ ထွက်ပြေးလာတာမှမဟုတ်တာ။ လာလည်း အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ဖြစ်မှာလေ။
ကျေးဇူရှင်တွေကိုမေ့နေပြီလား” ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ အမျိုးမဖြုတ်ပါဘူးကွာ တိုက်ပေးနဲ့လေ။ အဲဒါကြောင့်သူတို့ ခုထိနေနေနိုင်တာ “ရိုလိမ်ညာ“နဲ့တွေ့မှပဲ သူတို့ခင်မျာ အထီးရော အမပါ ပြေးလိုက်ရတာ။ခင်ဗျားတို့က သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာ တချိန်ကသူတို့ပိုင်တဲ့ မြေလည်း
ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံထဲမှာ အပိုင်သိမ်းထားလိုက်တယ်လေ။ အခုလည်းဒီဖက်ကျုးကျော်လာပြန်ပြီ။
အဲဒီတော့ သူတို့ကိုကျေးဇူးသိရမှာ ခင်ဗျားတို့ပဲ။
“ဒါတောင်မသိတာလူရယ်စရာပါဘဲ၊RNDP ပေါ ငတုံးကလေးရေ၊အခုအစိုးရကတောင်ခေါ်ပြီး
သတိပေး ထားပြီးပြီ” ရယ်ပါရယ်ပါ ငတုံးကြီးရေ၊ ကျုပ်သိတာ ထွေးစိန် တို့ ဝါကာအူကြောင်ကြား တို့ပဲသိတာ၊ RNDP ကဘာလဲဘယ်လဲ ဘယ်လိုမြောက်ပေးတာလည်း
ဘယ် သတင်းထဲမှာပါတာလဲ? ဋ္ဌေးလိမ်အူး ဘလော့မှာလား? အဲဒီထဲတော့ ကျုပ်လည်းဝင်မဖတ်မိဘူး။ အဖျက်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ မြောက်ပေးရင်တော့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဆွဲသာထည့်ထားလိုက်။ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ကာကွယ်တာ
ဆိုရင်တော့ ထိုင်ရှိခိုးလိုက်( သူများတွေပြောလို့ လိုက်ပြောကြည့်တာနော်  )
“— တဲ့လားဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရှိရင် တင်ပြပါမောင်ရင်
ဒီမိုကရေစီက အော်ဖိုဘဲ တတ်တာလေ၊အော်နေရင်းလူသိန်းနဲ့ချိသေကုန်၊ရွာပေါင်းများစွာ ပျက်စီကူုန်ပါရောလား၊ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို နားမလညလ်ဘဲ လူနည်းစုတွေကို ဖိနှိပ်လို့ရတယ် ထင်ရင်မှားမှာပေါ။” သတ်ဖြတ်မှုအများကြီးရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ လာလုပ်လို့မရဘူးလေ။ မှန်တာပေါ့ လူရိုင်းက လက်နက်နဲ့ပဲတန်တာ။ တပ်မတော် မရှိရင်ရခိုင်အမျိုးပြုတ်ပြီလေ။ ကျုပ်ကမအော်ပါဘူးဗျာ။ တစ်ခြားလူတွေက အော်မယ်လုပ်တုန်းမှာ ကျုးကျော်သူ အစွန်းရောက်လူရိုင်း တစ်ချို့ကြောင့် အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန် ကြတာ။
သတိပေးထားပြီ တခုခုဆို အစ္စလာမ်တွေကိုနှိပ်ကွပ်ပါတယ်ဆိုပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံတွေပါ ပါလာအောင်လုပ်နေတာ။လုပ်စရာမလို့ဘူး၊နှိပ်ကွပ်နေတာ၊ဘာသာရေးဖိနှီပ်မှုအဆိုးဆုံးစာရင်ကုလကထုတ်ပြန်ထားတာဘဲလေ ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်တာအသေချာဆုံးသက်သေဘဲလေ.”
အဲဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယုတ်ကန်းမှုလေ အစိုးရမကောင်းတာကို အကြောင်းပြုပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး
မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး အခွင့်အရေးနေရာယူချင်နေကြတာ။ ဘုန်းကြီးတွေက ကြောက်တာကိုး
ဘုန်းကြီးကျောင်းမီးလာရှို့တဲ့ အဖြစ်တွေရှိတော့ ကာကွယ်ဖို့ လူတွေနဲ့ စည်းရုံးတိုင်ပင်ရတာ
“သူခိုးကလူလူဟစ်မနေပါနဲ၊ အေး ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲသိလား၊ရခိုင်တွေကို ဘင်္ဂလားကခေါ်တဲံနာမည်ဘဲ မှတ်ထား၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မင်းတို့အဖေတွေပါဘဲ။”
လူကသူခိုးကို သူခိုးလို့အော်တာပါကွယ်။ အဲ..ရခိုင်က ရိုဟင်ဂျာဆို၊ ရိုဟင်ဂျာက ရခိုင်ရဲ့ သားတွေပေါ့၊ အင်းဒါဆို ရခိုင်ပါပြန်စစ်ရမဲ့ သဘောရှိတယ်။
“နိုင်ငံခြားမှာမြန်မာကို ရွှေ ခေါ်သလို့ဘဲ။ ဟိုမှာ ရခိုင်ပြည်ကအကောင်တွေကိုခေါ်တာ၊
ပြီးတော့ အပေါ်မှ ဟိုတကောင်က ကင်တားနားကို စော်ကားနေသေးတယ်၊ စောက်ဆင့်မရှိဘဲပြောနေကြတယ်၊” မြန်မာကို ရွှေလို့ခေါ်တာ မြန်မာပါပဲ သားသား ရိုလိမ်ညာရယ်။နိုင်ငံခြားက ခေါ်တာမဟုတ်။ ဆောရီးပါနော် ကင်တားနားနဲ့ အမျိုးတော်မှန်း
“ကင်တားနားဆိုက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကလူကွ၊ဘယ်ကောင်တွေမတရားတာလုပ်တယ်
မလုပ်တယ်သူ နားလည်းတယ်၊ မင်းတို့သူပါတဲ့ချေးတုန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိဘဲ၊UN စော်ကားလိုက်UNHCR စော်ကားလိုက် လုပ်မနေဲ့ပြီးတော့သူများကျွေးစားမွေးစာနဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်ချင်သေးတယ်၊ကူပါကယ်ပါပြောချင်သေးတယ်၊အရှက်ရှိကြစမ်းပါ။”
ဟုတ်လားသူကဘာတွေနားလည်လဲ။အခုတော့ နားလည်တယ်ပြောပေါ့ နောက်မှကင်တားနား
ကိုမဆဲနဲ့နော်။ သူပါတဲ့ ချေးလောက်အဆင့်မရှိဘူး ပြောရလောက်အောင် ခင်ဗျားက စား/နမ်းကြည့်ဘူးလို့လား။ အရင်ဆုံး UNHCR ကိုစော်ကားလိုက်လုပ်တယ် မပြောခင် ကင်တားနားမစင် အဆင့်ကိုစမ်းထားတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ပါးစပ်နဲ့လက်တွေကို ဆေးလိုက်အုံး။
ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေက ကျွေးစာမွေးစာတွေ တောင်းရမ်းစားသောက်ခဲ့တာလဲ?? ဘယ်သူတွေက ငိုချင်းချပြီး နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ဒယ်ဒီ့ကို “ကျွန်တော်တို့ ……ဘာသာဝင်တွေကို ကယ်ပါအုံး“လို့အော်ခဲ့တာလည်း? ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အုံးနော်။ စကားမစပ် ခင်ဗျားကြည့်ရတာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပဲလားဘူးသီးတောင် မောင်တောကရေးနေပုံရတယ်။ မြန်မာအသံထွက်တွေကလည်း ဘင်္ဂလီသံနဲ့ရေးနေတော့ မနည်းလိုက်ဖတ်နေရတယ်။ မြန်မာ အဘိဓာန်လေး ဆောင်ထားရင် ဒီကဖတ်ရတဲ့သူလည်း အဆင်ပြေတာပေါ့ကွယ်။
ဒီပိုစ့်က ကွန်မင့်တွေ လမ်းနဲနဲပြောင်းလာသလိုပဲ
ရခိုင်ဒေသဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့အဓိကရုဏ်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ် အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံပြီးဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါက တော့ သမတဦးသိန်းစိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်စုဖြစြ်ဖစ်၊ အခြားမည်သည့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ် ရပ်တည်ရမယ့် အနေအထားလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အဲဒီသံရုံးကိုးရုံး နဲ့ တကွအခြား နိုင်ငံတွေက လက်ဝင်ရှုပ်တာ ကို လက်ဝင်ရှုပ်တယ်လို့ပဲ.. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ကြဘို့လိုပါတယ်။
လက်ဝင်ရှုပ်တာကို ဆန့်ကျင်ဘို့မဟုတ်သေးတောင် ပြည်ပ ပြည်ပ ဆိုပြီး ထီကနဲဆို ထ က တဲ့လူတွေကိုတော့ တိုင်းပြည်ချစ်သူတိုင်းက မှတ်လဲမှတ်ထား (မြန်မာတွေက မေ့တတ်လွန်းတယ်) ပူးပေါင်းမှု့လဲ မလုပ်ဖို့လိုတယ်။
တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ သူ့ပြဿနာနဲ့သူ ရှိကြတာပါပဲ..။.
ဒီလိုပဲ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ ဖြေရှင်းနေကြတာပါပဲ..
အဲလိုဖြေရှင်းရင်း အခု အေဒီ ၂၀၁၂ ရောက်လာတာပါပဲ…။
အဲလိုဖြေရှင်းရင်း နောက် ဆယ်နှစ်- နှစ်ငါးဆယ်တစ်ရာ ကျွန်မဖြစ်သေးပဲ ဆက်သွားနေဖို့လိုပါတယ်။
သွေးစုနာပေါက်ရင် ကိုယ့်တင်ပါးကိုုယ်ကျိတ်ပြီး ဆေးလိမ်းရုံပဲ….
သွေးစုနာပေါက်တာကို မီးသံချောင်းခေါက်ပြီး လူစု သတင်းမေးစရာမလိုဘူး……။
` ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ် အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံပြီးဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်´ ဆိုတာကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာလေးတစ်ခုက ဒီပြသနာဟာ Green Rose တို့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာတင်မကပဲ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါ စပ်ဆက်နေတဲ့ ပြသနာဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ပြသနာ ကိုယ်ဖြေရှင်းရမှာမှန်ပေမယ့် ကိုယ်ဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံဟာ နိုင်ငံတကာက လက်ညှိုးထိုးစရာ (သူများအတွက်နိုင်ကွက်၊ ကိုယ့်အတွက်ဟာကွက်ဆိုတာမျိုး)မဖြစ်အောင် သတိထားရမှာပါ။
နောက်တစ်ခု.. အခုအရေးကြီးတာက ရခိုင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးပါ။ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ၊ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းခံကို နောက်မှရှာ၊ နောက်မှရှင်း၊ လောလောဆယ်တော့ နယ်မြေငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေ မဖြစ်ပေါ်ရေး ကိုဦးစားပေးရမှာပါ။ ဓါးထိုးခံရပြီး ဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့ လူနာကို အရင်ကုမလား? တရားခံကို ရှာပြီးအပြစ်ပေးဖို့ကိုအရင်လုပ်မလား ဆိုတာမျိုးပါပဲ?
Green Rose အမြင်တော့ လုံခြုံရေးအင်အားတိုးပြီးချထားဖို့အရင်လုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားးပေးကြပါဦး ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဲဒီ့ဒေသ ငြိမ်းချမ်းမှု အမြန်ဆုံးရမလဲဆိုတာကို
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ် အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ရှင်းလင်း ပြောကြား
Fri, 11/16/2012 – 17:57
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီး အမှူးပြုသော ဆရာတော် ကြီးများ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ် ရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရခို်င်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ် အခြေအနေဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင် သူတော်စင် ဆရာတော်ဘုရားများနှင့်တကွ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများအား ယခုကဲ့သို့ ပင့်ဖိတ်ရခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များအပေါ် သင်ခန်းစာများ ရယူပြီး နောင်တွင် အလားတူ ဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ကြွရောက်လာကြသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များထံမှလည်း အကြံဉာဏ်ကောင်းများ ရယူရန် ယခုကဲ့သို့ ဖိတ်ကြား တွေ့ဆုံ ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အတူတကွ နေထိုင်ကြသည့် သူများ အချင်းချင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် နေအိ်မ်များကို အကြမ်းဖက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်စဉ် (၂) ကြိ်မ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုပြည်နယ်အတွင်း စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ယောင်္ကျား မိန်းမ (၁၆ရ ) ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ယောင်္ကျား မိန်းမ (၂၂၃)ဦး ရှိခဲ့ပြီး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရသည့် အိုးအိမ်နှင့် အခြား အဆောက်အဦ ပေါင်း (၁၀၁၀၀) လုံး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့အိုးအိမ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခံရမှုကြောင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၆၉၈၀)၊ လူဦးရေ (၁၁၁၀၀၀) တို့သည် အိုးမဲ့၊ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပြီး အတိဒုက္ခများစွာ ရောက်ခဲ့ကြရသဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့်အတူ စေတနာရှင် ပြည်သူများ ကမ္ဘာ့ကုလသဂ္ဂဌာနေ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံအချို့နှင့် အသင်းအဖွဲ့ အချို့တို့မှ အကူအညီများ ရယူပြီး လတ်တလော အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ထားရပါတယ်။
ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ပွားမှု တစ်ခုအပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှုကို လက်ခံ လိုက်နာရမည့်အစား ဒေါသအလျောက် အုပ်စုတစ်ခုနှင့်တစ်ခု သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပွား ကျူးလွန်ရာမှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် အကြမ်းဖက်မှုအသွင်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိကာ ယခုကဲ့သို့ သေဆုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုနှင့် အတိဒုက္ခရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်၏ ဆုံးရှုံးမှုများပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဤကဲ့သို့ ဒေသအတွင်း အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မီးရှို့မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွား လာစေရန် လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ ပြင်းထန်သူ အချို့မှလည်း နောက်ကွယ်မှ မမှန်ကန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် မြှောက်ပင့် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ပေးမှုများ ရှိခဲ့သည့်အပြင် ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်း အချို့နှင့် နိုင်ငံအချို့တို့မှလည်း မမှန်မကန် လုပ်ကြံသတင်းများ ထုတ်လွှင့်၍ ပြဿနာပိုမို ကြီးထွားလာအောင် လုပ်ဆောင်မှုများလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်၊ သတ်ဖြတ်၊ မီးရှို့၊ ဖျက်ဆီးမှုများသည် မိမိတို့ အစိုးရသစ်လက်ထက် အဖက်ဖက်မှ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် အရှိန်အဟုန်ကို များစွာ ထိခိုက်စေပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့နှင့်လည်း ပြဿနာများကို မိမိတို့ အစိုးရမှ ယနေ့တိုင် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် ဗြိတိသျှတို့ အုပ်စိုးစဉ်ကပင် ရှိခဲ့ပြီး ၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ဗြိတိသျှတို့ ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မဟာမေဒင် (၅၈,၂၅၅) ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လာရောက် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး မူလက လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် ပြီးသည်နှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မပြန်ကြတော့ဘဲ အတည်တကျ နေထိုင်လာခဲ့ ကြပါတယ်။ အတည်တကျ နေထိုင်သူများမှ ပေါက်ဖွားလာကြသူများ၊ တစ်ချို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာကြသူများ ရှိခဲ့သဖြင့် ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်တွင် ဤကိစ္စကို အမျိုးသားရေးတာဝန် တစ်ရပ်အနေဖြင့် စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက် တားဆီးခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် အောက်တိုဘာလ ဖြစ်စဉ်များအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့နယ် (၁၇) မြို့နယ်အနက် (၁၁) မြို့နယ်၌ ပဋိပက္ခကြောင့် ပြည်သူများ ဒုက္ခခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒုက္ခခံစားရသည့် ပြည်သူများတွင် အမျိုးသမီး (၅၃.၈%)၊ အမျိုးသား (၄၆.၂ %) နှင့် (၁၂) နှစ်အောက် ကလေး (၄၂.၉ %) ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် အဓိက ထိခိုက် ခံစားရသူများမှာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများသာ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များ အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် လတ်တလော လိုအပ်သည့် လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ တစ်နှစ်စာအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၆၆.၅) သန်းခန့် လိုအပ်မည်ဟု ခန့်မှန်း တွက်ချက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လပဋိပက္ခအတွင်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့် ဒုက္ခသည် (၇၅,၀၀၀)အတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖိုး သက်သက်ပင်လျှင် တစ်လလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သန်းကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ယင်းလူမှုပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ဒုက္ခသည် (၁၁၁၀၀၀) ခန့်မှာ အတိဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည် သာမက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူ (၃၂) သိန်း မှာလည်း စိတ်ချလုံခြုံမှုမရှိဘဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းများအားလုံး ရပ်ဆိုင်းလျက်ရှိသည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင် နေရပါတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် မရှိခဲ့သော ရခိုင်ကျေးရွာများနှင့် ဘင်္ဂါလီကျေးရွာ အချို့တွင်လည်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံနှင့် လူမျိုးရေးစိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်အချို့နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အခြေခံ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအချို့တို့၏ အပြန်အလှန် အနှောက်အယှက် ပြုမှုများသည် ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပရဟိတဝန်ထမ်းများ၏ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်သည့် ဒေသများသို့ ရိက္ခာဖြန့်ဝေမှုများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အနှောက်အယှက်ပြု ဟန့်တားလျက်ရှိသဖြင့် ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးမှာ ပိုမိုကြပ်တည်းသော အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။ ယင်းသို့သော အခက်အခဲကြားမှပင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ (၄) လ ကာလအတွင်း ဆန်အိတ် (၁၀၈၀၀၀) ခန့်ကို လက်ဝယ်ရောက်ရှိအောင် ဖြန့်ဝေခဲ့ရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လက်ရှိအနေအထားကို သုံးသပ်ပါက လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် လူမှုပဋိပက္ခ များ၏ အကျိုးဆက် အတိဒုက္ခများအပြင် မူလကပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ရာခိုင်နှုန်း ( ၄၃.၅ %) ရှိပြီး ဒုတိယအများဆုံး ပြည်နယ် ဖြစ်နေခြင်း ၊ ၂၀၁ဝ ခုနှစ်အတွင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၌ ရေကြီးမှုနှင့် ဂီရိမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုခံစားရသော မြို့နယ်များမှ ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း (၂၈၉,၀၀၀) ခန့် ရှိနေခြင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် အာဟာရချို့တဲ့သူ ( ၂၀၀, ဝ၀၀) ခန့် ရှိနေခြင်းတို့သည် ပကတိစိန်ခေါ်မှုအဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူ (၃၂)သိန်းခန့် အနက် ပြည်သူ ( ၆ )သိ်န်း (၁၉%)ခန့်မှာ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဒုက္ခသည်များ အတွက် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများ ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးမှ စုပေါင်း၍ ညီညီညာညာ ဝို်င်းဝန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှသာ ဒုက္ခသည် ( ၆ )သိန်းခန့်၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေ အမှန်တစ်ရပ်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၂ခုနှစ်ခန့် မှစတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမှု ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှာ စုစုပေါင်း ( ရ )ကြိမ် ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖြစ်စဉ်များမှာ ယခင်ဖြစ်စဉ်များထက် ပိုမို ပြင်းထန်လာပြီး သာမန်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်များမှ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် များသို့ ကူးပြောင်းအောင် ကြိုးပမ်း လှုံ့ဆော်မှုများ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ လူမျိုးစုနှစ်စု အကြားရှိ မူလကပင်တည်ရှိနေသော လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်မှု၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ ကွဲပြားခြားနားမှုကို အခြေခံလျက် လူမှုရေးတံတိုင်း ခြားနားအောင် ပိုမို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းကဲ့သို့ လူမျိုးစုနှစ်ခု၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို အခြေခံလျက် ပိုမို ကွဲပြားခြားနားအောင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အသာစီးရအောင် ကြိုတင်စီမံ လုပ်ဆောင်နေကြသဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များဆိသို့ ဦးတည်စေလျက် ရှိနေကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် ကွဲပြားခြားနားသည့် လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်မှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကိုပင် နိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝသော စွမ်းအားအဖြစ် ပြောင်းလဲကာ အသုံးချနေသည့် သာဓကများကို သင်ခန်းစာ ရယူရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သာမန်ပြည်သူများ အနေဖြင့်မူ နိစ္စဓူဝ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေရေး၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်လိုသည့် သဘောဆန္ဒများသာ ရှိနေပြီး ပဋိပက္ခကြောင့် အတိဒုက္ခ ရောက်နေရသည့် အခြေအနေမှ လွတ်မြောက်အောင် အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုသည့် ဆန္ဒများရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
လူမှုပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၏ အရင်းခံ အကြောင်းတရားများကို သုံးသပ်ရာတွင် သမိုင်းဖြစ်စဉ်နှင့် လူမျိုးရေးခံစားမှု၊ န်ိုင်ငံရေး အခြေအနေများ သာမက ပကတိမြေပြင် အခြေအနေနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဘဝ အခြေအနေများသည်လည်း အရင်းခံအကြောင်းတရား ဖြစ်တည်မှုများအနေဖြင့် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၏ အရင်းခံ အကြောင်း တရားတွင် အောက်ပါ လူမှုစီးပွားရေး အချက်အလက်များက ပြဿနာ၏ အဓိက ရေသောက်မြစ်များ အဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲ၍ အထီးကျန် သီးခြား တည်ရှိနေခြင်း။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မြင့်မား၍ ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်း။
စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း။
စင်စစ်အားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်တံခါးဝ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပို်င်း ဒေသနှင့် လည်းကောင်း၊ အာဆီယံနို်င်ငံများနှင့် လည်းကောင်း၊ အိနိ္ဒယနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများ နှင့် လည်းကောင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသာမက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက် ကုန်းတွင်းပိတ် ပြည်နယ်များ ကပါ ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိပ်ကမ်းထွက်ပေါက်များကိုအသုံးပြုရန် စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ် မိမိတို့က ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဗဟိုချက် ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းနှင့် ကျောက်ဖြူရေနက် ဆိပ်ကမ်းတို့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ဆိပ်ကမ်းများအဖြစ် စတင် အသက်ဝင်လာတော့မည် ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ သံတွဲလေဆိပ်၊ ကျောက်ဖြူ လေဆိပ်နှင့် စစ်တွေ လေဆိပ်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ်များ ဖြစ်လာအောင် အစီအမံများချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းလျက် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း၊ ရေနံပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းထားပြီး ၎င်းတို့နှင့် အပြိုင် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုမှာ ပြည်မနှင့် သာမကအရှေ့အနောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ စင်္ကြံလမ်းကြောင်း အဖြစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဗဟိုချက် ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဗဟိုချက်ဖြစ်လာသည့်အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စီးဆင်းလာပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမည့် အခြေအနေကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်လျက် ရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့် ပြည်သူများ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးစည်ပင် သာယာဝပြောသော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ရာတွင် ယင်းမျှော်မှန်းချက်များ၏ အဓိကသော့ချက်မှာ တည်ငြိမ်ရေး၊ အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသည်လည်း လူမှုပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းမှသာ ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ ကမ္ဘာသည် Globalization ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည် ရွာကြီးတစ်ရွာ သဖွယ် ဖြစ်တည်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တစ်နေရာတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ဖြစ်စဉ် မှန်သမျှကို မိနစ်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းအတွင်း၌ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ အလျင်အမြန် ပြန့်နှံ့ စေလျက် ရှိပါတယ်။ မည်သည့် ဖြစ်စဉ်ကိုမျှ ဖုံးကွယ်ထားရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည်ကို သတိပြုဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဝင် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရသည့် အားလျော်စွာ လူသားများနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စ အရပ်ရပ်တွင် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဖြေရှင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တာဝန် ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံအများအပြားက လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေးစံချိန် စံညွှန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ပါက ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးစု၏ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုရမည် ဖြစ်သော်လည်း မိမိအကျိုးစီးပွား တစ်ခုတည်းကိုသာကွက်၍ ရှုမြင်ခြင်းမပြုဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမြင်တရားဖြင့် ရှုမြင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တစ်မျိုးသားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင် နိုင်ငံများအပါအဝင် လူသားအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လူမျိုးစုနှစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ် အပြန်အလှန် နားလည်ရေး၊ သီးခြားတည်ရှိသော ရပိုင်ခွင့်များကိုလေးစားမှု၊ ပဋိပက္ခ အသွင်မဆောင်ရေးနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သော လူမှုအသိုက်အဝန်း ဖြစ်ထွန်းရေးတို့အတွက် အစိုးရနှင့်အတူ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ တန်းတူရည်တူ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်း များ ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
ကဲ.. ကဲ.. သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်က အကြံဉာဏ်တောင်းနေပြီ
အဲဒီ့တော့ Green Rose တို့ ရွာသူရွာသားတွေ ဝိုင်းကြ ဝန်းကြပါဦး.. တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်.. ပေးရမယ့်အကြံဉာဏ်က
“ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်”တဲ့…
တကယ်တော်တဲ့ သမ္မတကြီးပါ။ သမ္မတကြီးရဲ့ ဘေးမှာရှိနေတဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အရမ်းတော်ပါတယ်။ အတော်ဆုံးက ငါတို့သူကြီးပဲ။ သမ္မတကြီးက အကြံဉာဏ်တောင်းဆိုလာနိုင်တယ်လို့ ကြိုမြင်ထားပြီး ဒီပို့စ်ကို အစောကြီးကတည်းက ကြိုတင်ထားတာ
မြှောက်ပေး… တက်ကလိုက်ဦးမယ်.. :528:
တောင်ကုတ်မှာ. မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေအသတ်ခံရတဲ့.. ကိစ္စကို… တရားဥပဒေအတိုင်း.. မျှမျှတတ…ဖြစ်အောင်အရင်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒါပြီးရင်.. ကျန်တာတွေ အလိုလို.. အစဉ်အဆက်လိုက်လာပြီး.. ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်..။
မြန်မာပြည်အနောက်ကမ်းဟာ.. များမကြာမှီနှစ်တွေမှာ.. အင်မတန်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ့်ဒေသပါ..။
နို်င်ငံခြားက.. ဒေါ်လာမီလီယန်ပေါင်းများစွာ.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံကြမယ့်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
အစိုးရက.. အဲဒီဒေသအတွက်..သတ်မှတ်ပြီးသား.. ဘတ်ဂျက်ကို.. ရှိပြီးသားထက်.. ၅ဆ (အနည်းဆုံး) တိုးပေးချသင့်ကြောင်း..။
သူကြီးခင်ဗျား..အဲဒီအမှုတင်မကဘူး မောင်တောမှာ အုပ်စုလိုက် မီးရှို့ လူသတ် စခဲ့တာတွေလည်း တရားခံတွေဖော်ထုတ်သင့်ပါပြီ။ အိမ်မှာ အကူခေါ်ထားတဲ့ သူက ဆရာဝန်လင်မယားကို ဓားနဲ့ခုတ်သတ်တာ သေလားရှင်လားတောင် သတင်းဆက်မရတော့ဘူး။ နောက် ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေကို သတ်တဲ့အမှု။ အမှုတွေက အများကြီးပါ။ ဒါတွေအားလုံး ဖော်ထုတ်ရင်လည်း ပြီးသွားလိမ့် မယ်လို့တော့ မထင်မိပါ။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်နေတာက နှစ်၅ဝမကတော့ ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
သီ ဟ သူ ရ ချာ လ တာ အာ ပေ တူး (DragonEmpireGroup) says:
ကဲပြော ဘယ်လောက်လိုလဲ ??
တရားသည့်ဥပဒေများစိုးမိုးရေးသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်လို့ ၎င်းနဲ့သက်ဆိုင်သည့်ကဏ္ဍများကို အထူးအလေးအနက်ထားပြီး အားဖြည့်ကြိုးပမ်းစေလိုပါတယ်…။
အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ဘင်္ဂလီများအကြား တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မယုံကြည်မှုတွေများလာပြီး ရန်လိုမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ အပြန်အလှန်လက်စားချေမှုတွေကို တားဆီးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..။
လူဝင်မှုဥပဒေအရ ဘယ်သူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမယ်၊ တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေအနက် ဘယ်သူတွေကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် လက်ခံမယ်၊ ခေတ္တနေထိုင်ခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်၊ ပြန်လည်နှင်ထုတ်မယ် စတဲ့ အဆင့်အတန်းတွေသတ်မှတ်ပြီး ဖိဖိစီးစီးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်..။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တဆက်တည်း အဘက်ဘက်က နောက်ကျနေတဲ့ ပြည်နယ်အတွင်း တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများကောင်းမွန်အောင် ပီပီပြင်ပြင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်..။
အဲဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ရခိုင်ကထွက်တဲ့သယံဇာတ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြည်နယ်အတွက် ခွဲဝေပေးဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ..။
လွှတ်တော်ကနေ လိုအပ်တဲ့ ဘတ်ဂျက်များ၊ သတ်ဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြဌာန်းပေးပြီး သမ္မတကြီးမှ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်၍ ဖိဖိစီးစီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..။
အရေးအကြီးဆုံးက သမ္မတကြီးအပါဝင် အစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်နဲ့ တပ်မတော်က တာဝန်ရှိသူများ၊ ပါတီများအနေနဲ့ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းလိုတဲ့ စိတ် ရှိဖို့ပါ…။
ရခိုင်ဒေသလည်း အမြန်ဆုံးအေးချမ်း ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံပဲတင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ ကောင်းတဲ့မှန်တဲ့အလုပ်တွေ ဆိုရင်တော့ ကောင်းကျိုးတွေက စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပြီး ။ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေရင်တော့ မကောင်းကျိုးတွေက စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လောလောဆယ် မသိနိုင်ပေမဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့ ရင့်မှဲ့သီးပွင့်တဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာတခုကိုရောက်မှ သိပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လုပ် ကောင်းတာ မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးသိတဲ့သူမရှိပါဘူး။စောစောပိုင်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကမာ္ဘပျက်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ ဟောကိန်းအတိုင်း ငလျှင်တွေလည်း အကြီးအကျယ်လှုပ်ပြီးပါပြီ။ အာရှတိုက်ဟာလည်း စစ်မက်ဖြစ်ပွား နိုင်တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒါကြောင့် အကုသိုလ်ကို ရှောင်ပြီး ကုသိုလ်ကို ဆောင်နိုင်မှသာ ကပ်ဘေးရောဂါ သဘာဝအန ္တရာယ်တွေက
ကိုရင်နေးချား.. တကယ်ကြီးကို …အဲလိုယုံကြည်ချက်ရှိနေတာလားဟင်င်င်..
သူကမကောင်းတာလုပ်ရင်.. သူမကောင်းတာဖြစ်အောင်.. ကိုယ်အပါအဝင်.. လူအများစုက.. အများစုသဘောတူညီချက်နဲ့.. မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူ.. မကောင်းတာဖြစ်ကိုဖြစ်ရအောင်.. ထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်ခံရအောင်.. ဝိုင်းလုပ်ကြရပါတယ်..။
ဒီခေတ်မှာတော့.. ဥပဒေနဲ့ပေါ့.. …။ တရားမျှတာအောင်.. ဥပဒေနဲ့လုပ်ကြရမှာပါ..။
သူကောင်းတာလုပ်ရင်.. ကောင်းတာဖြစ်အောင်.. ဝိုင်းလုပ်ရတာပါပဲ..။
… ဘယ်အချိန်..ဘယ်နေရာကနေ.. ဘယ်လိုနဲ့ပြန်လာမှန်းမသိ.. ဘယ်လိုမှအစိုးမရတဲ့”ကံ”အကြောင်း.. ရှင်းပြပြောဆိုနေတာပါ..။
ဟိုဒင်းပါး စောင်းတီးတဲ့အလုပ်ကြီးတော့ မလုပ်တော့ပါဘူး သူကြီးရေ ။ မယုံတဲ့သူတွေကိုလည်း အတင်းယုံရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ယုံကြပါ။
ကံ ကအရေးယူတာကို ထိုင်စောင့်နေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာ ဖြစ်မယ် ဆိုတော့ ကောင်းတာကိုလုပ်ကြဖို့ အားပေးတာပါ ။ မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာ ဖြစ်တတ်လို့ မကောင်းတာကို မလုပ်ကြဖို့ အကြံပေးတာပါ။
မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကို ဥပဒေ အရ အရေးယူယုံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ အလျှောက်ကောင်းလို့ အထောင်းသက်သာပဲပြောပြော ငွေများတရားနိုင်ပဲ ပြောပြော လွတ်တတ်ပါသေးတယ်။ ကံကတော့ မလွတ်နိုုင်ပါဘူး ။ မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကို ဥပဒေအရ အရေးယူပြီးလဲ ကံအရတော့ အဆိုးကျိုးတွေကလည်းထပ်ပေးတတ်ပါသေးတယ်။ ကံဆိုတာနားလည်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲလို့ အငြင်းသန်သူတွေကို ယုံအောင်ရှင်းပြဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကမ္ဘာပျက် ဟောကိန်းပါ ကောလာဟလ စာရွက်များ ရန်ကုန်လူထုကြား ပျံ့နှံ့
ပိုစ့်…….ကမ္ဘာပေါ်၌ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခြင်း၊ မီးတောင်များ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ပြင်း ထန်သောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များဖြစ်ပွားကာ……
သူကြီး ………….ထွက်ရပ်ဂေါက်…ခပ်ကြောင်ကြောင်လူတွေက.. နာမယ်ကြီး..လူနာမယ်..ဘုန်းကြီးနာမယ်သုံးပြီးလုပ်တယ် ပြောကြတယ်..။…………..
အခုငလျှင်တွေအကြီးအကျယ်လှုပ်နေတော့ သူတို့ပြောတာ မှန်နေတယ် ။ သူကြီး ကိုယ်မယုံတိုင်းပေါက်ကရ လျှောက်ပြောနေတာတွေက မှားနေတာကို တွေ့နေရတယ်။
မိစာ္ဆဒိတ္ထိသဂျီးနဲ့တော့ ပြိုင်မငြင်းနေပါနဲ့ ဦးနေးချားရယ်… သူက ငရဲမီးတွေ့ရင်တောင် ဒစ်စကို ဆလိုက်မီးပါလို့ ဇွတ်ငြင်းအုံးမှာ…။ :chee:
အကောင်းဆုံးကတော့နေပြည်တော်ကို မြောက်ဦး.နဲ့ ဘူးသီးတောင်မောင်းတော တစ်ခုု့ခု့ကို ပြောင်းလိုက်..အဲ့ဒါ အရာအားလုံးငြိမ်း.ပဲ အဒူမှ့ အလှုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့
အရင်ခေတ်က ရန်ကုန် အစိုးရလို ဖြစ်စေချင်လို့လား
နေပြည်တော်ကို အဲဒီရွှေ့လိုက်မှ အမှန်တကယ်ကို
အိုဘားမားကတော့ “ Every human being within these borders isapart of your nation’s story, and you should embrace that. That’s notasource of weakness, that’sasource of strength — if you recognize it.” လို့ပြောသွားလေရဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို့လည်းသုံးနှုန်း သွားသေးရဲ့၊ နောက်ပြီး citizenship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဒီလိုပြောသွားသေးတယ်။
“ Every nation struggles to define citizenship. America has had great debates about these issues, and those debates continue to this day, because we’reanation of immigrants — people coming from every different part of the world. But what we’ve learned in the United States is that there are certain principles that are universal, apply to everybody no matter what you look like, no matter where you come from, no matter what religion you practice. The right of people to live without the threat that their families may be harmed or their homes may be burned simply because of who they are or where they come from.
Only the people of this country ultimately can define your union, can define what it means to beacitizen of this country”
ဒီလိုလေးလည်း တွန်းအားပေးသွားသေးရဲ့ “And the United States will beafriend to any nation that respects the rights of its citizens and the responsibilities of international law.”
ဒါပေမယ့် America is America, Myanmar is Myanmar ပါပဲ။ မူလသမိုင်းကြောင်းတွေ မတူသလို၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ မတူပါဘူး။ အဲဒီ့တော့ အဖက်ဖက်က ညှိနှိုင်းပြီး အကောင်းဆုံးကို ရွေးရမှာပါ။ အဓိကကတော့ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို လေးစားဖို့ပါပဲ။
ရခိုင်အရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပန်ကြားချက်အပေါ် ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှု ဘာများရှိခဲ့လည်းမသိဘူးနော်။
မြန်မာပြည်အနောက်ကမ်းအရေးအခင်းမှာ. ယူအက်စ်က အပေါ်ကကြည့်လို့ရတာမို့.. ဘာတွေဖြစ်နေလည်း သေသေချာချာသိတယ်ထင်မိတယ်..။
ဒေသဆိုင်ရာအလိုက် မဟာဗျုဟာအမြင်နဲ့ကြည့်တာမို့.. ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာလည်း.. ပိုတွက်တတ်ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်အနောက်ကမ်းအရေးအခင်းကို.. မြန်မာအစိုးရက.. ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်တတ်တယ်ထင်ပါတယ်..။
America is America, Myanmar is Myanmar ဆိုပေမယ့်… တကယ်တော့.. ယူအက်စ်ဖယ်ဒရယ်စနစ်အောက်မှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအစုံ…ပေါင်း ၃သိန်းလောက်နေထိုင်နေကြပြီး.. မြန်မာပြည်အသေးစားလေး ဆောက်ထားတာပါ..။
အဲဒီကနေ မြန်မာပြည်ဘယ်လိုလုပ်သင့်..လုပ်ရမလည်း.. မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါကြောင်း…